Blog Reader: [ထုဆစ်ပြီးသောရင်ခွင်အပိုင်းအစလေးများ] 25 New Entries: ကောင်မလေးရဲ့ဖြစ်သလိုစားခြင်း
[ထုဆစ်ပြီးသောရင်ခွင်အပိုင်းအစလေးများ] 25 New Entries: ကောင်မလေးရဲ့ဖြစ်သလိုစားခြင်း
ချင်းမလေးတက်ဂ်ထားတာကြာပါပြီ.. ကောင်မလေးအခုမှပဲ ရေးပေးနိုင်တော့တယ်.. ချင်းမလေးရေ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်.. :) ဖြစ်သလိုစားခြင်းဆိုတော့ ကောင်မလေးအတွက် အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်.. နဂိုကတည်းက ကောင်မလေးက ဖြစ်သလိုစားတတ်တယ်လေ.. ပာင်းကလည်း ချေးများသေးတယ်.. ပြီးတော့ သူများချက်တာ သိပ်မစားဘူး.. :) မေ ဒါမှမပာုတ် အဘွားလေး၊အန်တီတို့ချက်မှ စားတာ.. ပထမ ဒီရောက်ရောက်ချင်းတုန်းက တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်လေ.. မေကပြန်သွားတော့ ကိုယ့်ပာာကိုယ် ချက်စားရတာကိုး.. ဘယ်သူချက်ချက်မစားတဲ့ ကောင်မလေးက ကိုယ့်ပာာကိုယ်ချက်တော့လည်း မစားပါဘူး.. :D ဖေကတော့ သည်းခံပြီးစားပေးရှာပါတယ်.. ပီားပီား.. တစ်ခါတစ်လေ သည်းမခံနိုင်တော့ရင် ကိုယ့်ပာာကိုယ်ပဲ ဝင်ချက်လိုက်သေးတယ်.. :P :P
မေမြို့မှာနေတုန်းကတော့ မနက်စာ တိုပာူးပျော့တစ်ခုပဲစားတယ်.. အိမ်ရှေ့ဆိုင်ကလေ.. အဲ့ဒီဆိုင်ကလွဲရင် ဘယ်ဆိုင်ကမှမစားဘူး.. ဈေးကလည်း တစ်ပတ်ကို အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေးနဲ့ စနေ.. သုံးရက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့လေးရက်တော့ ဗိုက်မှောက်ပေါ့.. ငါးဆိုလည်း ငါးကြင်းတစ်မျိုးပဲစားတယ်.. ဒီမှာက ရှာလို့မတွေ့တော့ သွားပြန်ဦးပဲာ့ ပာင်းတစ်မျိုး.. :( ကျန်တဲ့အသားတွေက ပာက်ပာက်ပက်ပက် သိပ်မစားတော့ ပာင်းသီးပာင်းရွက်ပဲ စားဖြစ်တယ်.. ဒီရောက်လာတော့ မနက်စာလွတ်သွားရော.. မနက်စာမစားဖြစ်တာ တစ်နှစ်ကျော်ပါပြီ... သူများတွေလို ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်လည်း မကြိုက်တော့ ဘာမှကိုမစားဖြစ်တော့တာ.. တိုပာူးပျော့လည်း မရှိဘူးလေ.. :( အခုနောက်ပိုင်းဆိုပိုဆိုး.. ကျောင်းက မနက်အစောကြီးတက်ရတယ်.. မနက်စာမစားဖြစ်တော့ဘူး.. breaktime မှာတော့ ဆာနေသမျှ အတိုးချပြီး စားတယ်.. အဲ့ဒါကြောင့်ထင်တယ်.. သားငယ်ကပြောတယ်.. နင့်ကို ကျောင်းမှာတွေ့လိုက်ရင် canteen ထိုင်နေတာချည်းပဲတဲ့..
ကျောင်းသွားတဲ့နေ့တွေဆိုရင်တော့ ပုံမှန်စားဖြစ်ပါတယ်.. အခုတလော ဘာဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူး.. ကောင်မလေး အစားအများကြီးစားရင် တစ်နေကုန်ခံနေတာပါ.. ကျောင်းမှာ မနက်စာစားလိုက်မိရင် ညပိုင်းဆို အိမ်မှာ ထမင်းသိပ်မစားနိုင်တော့ဘူး.. တစ်ခါတစ်လေ ၃၊၄ရက် ဖြစ်သွားတတ်တယ်.. အဲ့ဒီအခါမျိုးကျရင် ကောင်မလေးက မေ့ကိုပြောတာပေါ့.. " သမီး အိမ်ထမင်း အိမ်ပာင်းမစားရတာ ၄ရက်ကျော်သွားပြီ " ဆိုရင် မေကဘာပြန်ပြောလဲ သိလား.. " ဘယ်သူက မကျွေးဘဲထားလို့လဲ " တဲ့ .. :D ပာုတ်တော့လည်း ပာုတ်တာပဲ.. ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင် မနက်စာစားဖို့ အခွင့်အရေးက မရှိဘူး.. ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား.. မနက်ထတဲ့အချိန်က ၁၁နာရီ ကျော်သွားလို့.. :P အခု မေလည်းမရှိတော့ ညီမလေးက ချက်ကျွေးပါတယ်.. အထင်မသေးနဲ့နော် .. ညီမလေးက ကောင်မလေးထက် ပာင်းပိုချက်တတ်တယ်.. ဒါပေမယ့် ကောင်မလေး ထမင်းစားပျက်သွားတယ်.. ပီားပီား.. သူချက်တာက မေချက်တာနဲ့ တစ်ပုံစံထဲ.. သိလား.. အရသာတူရင် ပိုကောင်းမယ်.. ပာင့်.. :(( ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကတော့ တစ်ခါတစ်ရံ စားဖြစ်ပါတယ်.. မဆိုးပါဘူး.. အစာအိမ်အတွက် သိပ်မကောင်းဘူးလို့တော့ ပြောကြတာပဲ... အပြင်မှာဝယ်စားရင် ပိုမကောင်းဘူးလေ.. သိတယ်မပာုတ်လား.. အပြင်ကအစားအစာတွေက.. အစပ်အပာပ်လည်းမတည့်ဘူး.. ဘာအရသာတွေမှန်းလည်းမသိဘူး.. မေပြန်လာရင်တော့ ထမင်းစားပြန်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်.. ပြောရဦးမယ်. ကောင်မလေး နည်းနည်းပိန်သွားတယ်.. :P :P
ချင်းမလေးရေ.. ရေးပြီးသွားပြီ.. ကျေနပ်တော့နော်.. :)
မနေ့ညက ကောင်မလေး ပိုက်ဆံအိတ်ပျောက်သွားပါတယ်.. ဘယ်လိုပျောက်သွားတယ်ဆိုတာ ပြောပြမယ်နော်... ကောင်မလေးက ညတိုင်း ကောင်မလေးတို့အိမ်နားက beach park တစ်ခုမှာ သွားသွားထိုင်လေ့ရှိပါတယ်.. မနေ့ညကလည်း ထုံးစံအတိုင်းပေါ့.. ကမ်းစပ်မှာသွားထိုင်ပြီးတော့ တွေးချင်ရာတွေးနေတာ.. အိမ်မှာရောက်နေတဲ့ အစ်ကိုက ဖုန်းဆက်လှမ်းခေါ်တာနဲ့ ခဏဆက်ထိုင်ပြီးတော့ အိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီး အေးအေးဆေးဆေးပဲ လျှောက်လာတယ်.. လူက နည်းနည်းအိပ်ချင်နေပေမယ့် အားယူပြီး ဆက်လျှောက်လာပါတယ်.. စိတ်ထဲမှာ ခြောက်ကပ်ကပ်ဖြစ်နေတာလည်း ပါလို့ အိမ်ပြန်ဖို့က သိပ်စိတ်မပါဘူး.. အဲ့ဒါနဲ့ တစ်ပတ်လောက် လမ်းလျှောက်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ တစ်ပတ်လျှောက်တယ်.. ဆော့လိုက် လျှောက်လိုက်နဲ့ လျှောက်နေတာ.. ဖြစ်ချင်တော့ ကောင်မလေး ပိုက်ဆံအိတ် ကျပျောက်သွားပါတယ်... ဒီအသက်အရွယ်ရောက်နေပြီ.. ပိုက်ဆံအိတ်ကျပျောက်တယ်ဆိုတော့လည်း ကောင်မလေး တော်တော်ထူပူသွားတယ်.. ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး.. အဲ့ဒါနဲ့ ရလိုရငြား တစ်ပတ်ရှာကြည့်တယ်. မတွေ့ဘူး.. နောက်တစ်ပတ်ပြန်ရှာတယ်.. မတွေ့ပြန်ဘူး.. တစ်ယောက်တည်းလေ. ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး... ဖြစ်ချင်တော့ ရဲနှစ်ယောက်က park ထဲမှာ ပြဿနာတစ်ခုတက်လို့ ရောက်လာတယ်.. အဲ့ဒါနဲ့ ကောင်မလေးလည်း မရဲတရဲပေါ့နော်.. ပြောပြရတယ်.. သူတို့ကတော့ ပြောပါတယ်. အနီးဆုံးရဲစခန်းတစ်ခုမှာ အကြောင်းကြားလိုက်ပါတဲ့.. တကယ်လေသွားတယ်.. ကောင်မလေးက ရဲဆို ကြောက်တတ်တယ်.. :D
နာရီလည်းမကြည့်မိတော့ဘူး.. လူကလည်း ငိုချင်နေပြီ.. park က အပြန်လမ်းမှာ ကောင်မလေး အစ်ကိုတစ်ယောက်လို ခင်ရတဲ့ အစ်ကိုဆီကို ဖုန်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်.. ပိုက်ဆံအိတ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့.. သူနေတဲ့နေရာနဲ့ ကောင်မလေးနေတဲ့နေရာနဲ့က တော်တော်ဝေးပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သူချက်ချင်းပဲ taxi နဲ့ရောက်လာတယ်.. ကောင်မလေး ထိုင်တောင်မထိုင်နိုင်ဘူး.. ရင်တွေတုန်နေတာ... ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမေးတော့ အကြောင်းစုံပြောပြနေတုန်းမှာပဲ ညီမလေး သူ့ဖုန်းလေးကိုကိုင်ပြီးတော့ ရောက်လာပါတယ်.. ကောင်မလေးကိုလည်း ပြောတာပေါ့.. ဖုန်းဆက်တာဘာလို့မကိုင်တာလဲဆိုပြီးတော့ .. အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ ကောင်မလေးဖုန်းကို ကောင်မလေးပြန်ကြည့်မိပါတယ်.. ဖုန်းက auto power-off ဖြစ်နေတယ်.. သိတယ်မလား sony ericcson W910i လေ.. စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ.. နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း နာရီကမပါ.. :D ကောင်မလေးက အိမ်ပြန်ရောက်ရင် နာရီချွတ်ထားတတ်တယ်.. ညီမလေးက ပြောပြီးတော့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ ခဏစောင့်နေတယ်.. ကောင်မလေးက အကြောင်းစုံပြောပြပြီးတော့မှ ညီမလေးနဲ့အတူတူ အိမ်ပေါ်ကိုတက်ပါတယ်.. ဓာတ်လှေကားထိပ်မှာ ကောင်မလေးအစ်ကို ရပ်စောင့်နေတယ်... " ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ" တဲ့.. အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကောင်မလေး အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက စကားလုံးဝမပြောနိုင်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ဧည့်ခန်းမှာပဲ ခဏထိုင်.. စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ အဖြစ်အပျက်တွေ အကုန်လုံးကို ပြောပြဖြစ်ပါတယ်.. အဲ့ဒီအချိန်မှာ. ကောင်မလေး ဘာဖြစ်နေလဲသိလား.. အသံတွေတော်တော်တုန်နေတယ်. ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးအသံတုန်နေတာ သူတို့မသိဘူး..။
ဲကောင်မလေးပြောသမျှ စကားတွေကို အကိုနှစ်ယောက်နဲ့ အစ်မရဲ့အဖေတို့ နားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ထွက်လာတဲ့ မှတ်ချက်က ဘာဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ.. :) " နင်ပြောတာတွေအကုန်လုံးက လုံးဝ ယုတ္တိမရှိဘူး " တဲ့ . ကောင်မလေးစိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်.. ကောင်မလေးခေါင်းထဲမှာလည်း အတွေးတွေတော်တော်များပါတယ်.. ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာပါသွားတဲ့ ငွေပမာဏက ကောင်မလေးလို ကျောင်းသူတစ်ယောက် အနေနဲ့ တော်တော့်ကိုများပါတယ်.. ဒါကို ဖေနဲ့မေမသိဘဲ ဘယ်လိုပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းရမလဲလို့ ခေါင်းစားနေတုန်းမှာ အဲ့လိုမှတ်ချက်ကြီးတစ်ခု ထွက်လာတော့ ကောင်မလေး စိတ်ဓာတ်တော်တော်ကျသွားတယ်. ဘယ်လိုပြောရမှန်းလည်းမသိဘူး.. သူတို့ ဘယ်လိုထင်နေလဲဆိုတာ ကောင်မလေးသိပါတယ်..း) ကောင်မလေး ရည်းစားနဲ့သွားချိန်းတွေ့တယ်၊ ရည်းစားက ပိုက်ဆံလိုလို့ ကောင်မလေးက ထုတ်ပေးလိုက်တယ်.. အဲ့လိုသဘောမျိုး ထင်နေကြတာကို သူတို့ထုတ်မပြောလည်း ကောင်မလေး သိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် လောလောဆယ် ကောင်မလေး ခေါင်းထဲမှာရှိတာက အင်္ဂါနေ့ သွေးလှူဖို့အတွက် ကျောင်းသားကဒ်လည်း ပါသွားတယ်၊ ပြီးတော့ ကောင်မလေး IC လည်း လည်းပါသွားတယ်.. ကျောင်းသားကဒ်ပါသွားတာက ပြန်လုပ်ဖို့ ကိစ္စမရှိပေမယ့် IC ပြန်လုပ်ရင် fine အနေနဲ့ $100 ပေးရပါမယ်.. :( ပိုက်ဆံကို ဘယ်ကရှာရမှန်းလည်းမသိဘူး.... ဖေနဲ့မေကို ပြန်မပြောပါနဲ့ဆိုတာကို မပြောလို့ကိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာချည်းပဲ.. စိတ်ပိန်တယ်.. ဖေနဲ့မေကို ပြန်မပြောစေချင်တာက ဆူမှာကြောက်လို့မပာုတ်ပါဘူး.. ကိုယ်လုပ်ထားတာပဲ.. ကိုယ်ခံရဲရမှာပေါ့.. ဒါပေမယ့် ဖေနဲ့မေပြန်သွားတာက ဖေ့ရွာမှာ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲသွားလုပ်တာပါ.. အလှူရက်ကလည်း လိုသေးတယ်.. ဒီကြားထဲမှာ ဒီကိစ္စကြီးသိသွားရင် အလှူလုပ်ရတာ စိတ်မဖြောင့်မှာစိုးလို့ပါ.. အလှူရက်ပြီးမှပြောဖို့ကိုလည်း မနည်းကို တောင်းပန်ထားရတယ်.. ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးတစ်ခုတော့ ပြောလိုက်ပါတယ်.. ဖေသိသွားလည်း ဒီကိစ္စကို ကောင်မလေးကိုယ်တိုင်ပဲရှင်းမယ်လို့... အဲ့ဒါကို ရယ်ကြတယ်သိလား.. ဒီငချွတ်လေးက ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုရှင်းမှာလဲဆိုပြီးတော့လေ.. တကယ်ဆို သူတို့အားပေးရမှာမပာုတ်ဘူးလား..
ကောင်မလေးအတွက် သင်ခန်းစာတစ်ခုပါ.. လောလောဆယ် ကောင်မလေးအလုပ်ရှာနေတယ်.. part-timer လေးများလိုရင် လက်တို့ခဲ့ဦးနော်.. :P :P :P police report နဲ့ ကျောင်းသားကဒ် သွားလုပ်ပြီးလို့ အင်္ဂါနေ့ သွေးလှူဖို့ကိစ္စအတွက် စိတ်အေးရပါပြီ.. သာဓုခေါ်ကြပါဦးနော်... တစ်ခါတည်းနဲ့မှတ်သွားတယ်ဆိုတာ ဒီလိုကိစ္စမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်.. ကောင်မလေး နောက်ဆို အဲ့ဒီ park ထဲကို မသွားတော့ဘူး.. :D
ဘလော့ရေးခြင်းကို ကောင်မလေး အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်နားပါတယ်.. ဆိုတဲ့အကြောင်း နှုတ်ဆက်တာပါ.. ကောင်မလေးရေးထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို သေသေချာချာဖတ်ပေးတဲ့ သူတွေရော၊ အချိန်မရလို့ ခဏလောက်ပဲလာနိုင်တဲ့သူတွေရော.. လာသွားပေမယ့် နှုတ်မဆက်ဖြစ်တဲ့သူတွေရော.. အကုန်လုံးကို ကောင်မလေး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကောင်မလေးရဲ့ပို့စ်တွေက ကောင်မလေးတစ်ဦးတည်းရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေပဲ ဖြစ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကောင်မလေးတောင်းပန်ပါတယ်နော်.. ရင့်ကျက်မှုတွေ အများကြီး ယူရဦးမှာဖြစ်လို့ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိလို့ ပြောရတာပါ.. ရင့်ကျက်မှုတွေရှိလာမှ ကောင်မလေးရဲ့ဘလော့ကို ဆက်ရေးပါမယ်.. ရပ်နားတဲ့အတောအတွင်း ကောင်မလေးအိမ်ကို လာလည်တဲ့ မောင်နှမတွေကိုလည်း ကောင်မလေးက ကျေးဇူးတင်မှာပါ.. ကောင်မလေးမရှိတဲ့အချိန်မှာ အိမ်လေးကို စောင့်ရှောက်ထားပေးပါလို့.... သံလွင်ရေ.. နင် tag တဲ့ ပို့စ်လေးကို ငါပြန်လာမှ ဆက်ရေးပေးမယ်နော်.. ဖြစ်တယ်မပာုတ်လား.. အကုန်လုံးပဲ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ကြပါ.. တာ့တာနော်... တစ်ခု ကောင်မလေး ဘလော့ရေးတာ ကစားနေတာမပာုတ်ပါဘူး.. တကယ်တာ့တာနော်..း)
Labrador သို့ ဒုတိယတစ်ခေါက်
ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့.. ရုံးပိတ်ရက်ပေါ့နော်။ အိမ်က အစ်မတော်က မနေ့ကတည်းကပြောတယ်.. Labrador သွားလည်ကြမလို့.. အကြီးမနဲ့အငယ်မ လိုက်ကြမလားတဲ့။ စိတ်ထဲမှာတော့ထင်သား.. ဒီနာမည် ကြားဖူးနေသလိုပဲလို့။ ကြားဖူးမှာပေါ့.. ကောင်မလေး ကျောင်းမှာဝင်ထားတဲ့ Nature Club က ပထမအခေါက် ကျောင်းသုံးပတ်ပိတ်တုန်းမှာ excursion ထွက်တော့ Labrador Nature Reserve ကို တစ်ခေါက်ရောက်ထားဖူးတယ်လေ.. စိတ်ထဲမှာ ပျော်သွားတယ်. ပထမတစ်ခေါက်ရောက်တုန်းက ကျောင်းကလူတွေနဲ့ဆိုတော့ ကောင်းကောင်း စိတ်မလွတ်လပ်ခဲ့ဘူး။ မနက်ဖြန်တော့ အပီပျော်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့။ အဲ့ဒါနဲ့ ညကတည်းက လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်ထားတယ်။ လုပ်စရာရှိတာဆိုတာ ပုံမှန် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း လုပ်နေကျအလုပ်တွေလေ.. မီးပူတိုက်တယ်.. ပဲာပဲာ.. ညစောစောအိပ်မယ် ရည်ရွယ်ထားပေမယ့် မျက်လုံးက အလုပ်မလုပ်ဘူးလေ.. :D ပုံမှန်အိပ်ချိန်က ၄နာရီဝန်းကျင်ဆိုတော့ ခပ်စောစော ဘယ်လိုမှအိပ်မရဘူး.. အဲ့ဒါနဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့ ဇာတ်ကားနှစ်ကားကြည့်လိုက်တာ. ၃နာရီထိုးနေပြီ.. :P အဲ့ဒီအချိန်မှ ဇာတ်ကားကို မြန်မြန်ဖြတ်.. အိပ်ဖို့ပြင်ရတယ်.. အိပ်ခါနီးကျတော့ ပုံပြင်ကမရှိ.. :D အဲ့ဒါနဲ့ သီချင်းလေးနားထောင်ပြီး အိပ်ပေါ့.. မနက်ကျတော့ ၉နာရီမှ အစ်မတော်လာနှိုးလို့ နိုးရတဲ့အဖြစ်.. ပုံမှန်အစီအစဉ်က ၉နာရီမှာ အိမ်ကထွက်မလို့ပါ. :D ဒါပေမယ့် ထုံးစံကိုဖျက်လို့မကောင်းဘူးလေ.. ပီားပီား.. နောက်ကျရတော့တာပေါ့.. လူကနောက်ကျရတဲ့အထဲ ထမင်းကြော်မစားရင် အိမ်ကဆူမယ်ဆိုလို့ စားလိုက်ရသေးတယ်။ အိမ်ကအထွက်. အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကတော့ ဘီယာလေး.. ဘာလေး ဝယ်မလို့ပေါ့.. နောက်မှစဉ်းစားမိတာက ကောင်မလေးတို့ဝယ်မယ့် Super Market မှာ ဖေနဲ့မေက ဈေးဝယ်နေတယ်လေ.. :D နောက်တစ်ဆိုင်ပြောင်း.. ဘီယာ ၈ဘူးဝယ်.. ပာိုဖက်အိမ်ကအစ်မတွေဆီထွက်.. ခဏထိုင်စောင့်ပြီးတော့ ကောင်မလေးတို့ ခရီးစဉ်ကို စခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ.. တော်သေးတာပေါ့.. ထွက်တဲ့အချိန်က ၁၁း၃၀နာရီပဲ ရှိသေးလို့.. :P
လူအားလုံးပေါင်းက ကောင်မလေးတို့ ၃ယောက်နဲ့ပေါင်းရင် ၉ယောက်ပါ.. ၉ဂဏန်းမကောင်းပေမယ်လို့ ကောင်မလေးတို့စိတ်ထဲမှာ ဘာမှမရှိတော့ အေးဆေးပဲ..။ တကယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့အစ်မ ၅ယောက်ကို ကောင်မလေးတို့ညီအစ်မ မသိပါဘူး.. စိတ်ထဲမှာလည်း နည်းနည်းရှိန်တာပေါ့.. သိတယ်မလား.. လူကြောက်တဲ့ကောင်မလေးလေ.. :D အစ်မတစ်ယောက်ကိုပဲ သိတယ်.. ဒါပေမယ့် အစ်မတွေအကုန်လုံးက ခင်ဖို့ကောင်းတော့ ခဏလေးနဲ့ ခင်သွားကြရော..။ ပထမဆုံးလိုအပ်တာက ရေခဲထုပ်.. :P အအေးခံရမယ်လေ.. ပဲာပဲာ.. ဘယ်မှာမှရှာမရပေမယ့် 7-11 မှာ ရသွားတယ်။ ကားကတော့ 51 ပေါ့.. သိပ်မသွားလိုက်ရဘူး.. ကားပေါ်မှာ စကားနည်းနည်းပြောပြီး ခဏလေးပဲကြာတယ်.. ရောက်သွားရော.. Labrador ကိုတော့မပာုတ်ဘူး.. အဲ့ဒီကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်.. :( ကောင်မလေးတို့ လမ်းတော်တော်လျှောက်လိုက်ရတယ်.. ပြီးတော့ လမ်းနှစ်ခွကိုရောက်တာပေါ့.. လမ်းနှစ်ခွရောက်မှ Labrador Nature Reserve ဆိုတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးကိုတွေ့တယ်.. အောက်ကကျောက်တုံးကြီးပေါ့..
Labrador အဝင် ကျောက်တုံးကြီး
ရောက်ပြီလားဆိုတော့ မရောက်သေးပါဘူး. လမ်းနှစ်ခွက ဘယ်ဖက်ကိုဆက်လျှောက်ရပါတယ်.. "ခရီးများအဆုံးထိလျှောက်" လေ.. :D မလျှောက်လို့မှမရတာ.. အောက်ကအတိုင်းပေါ့...
ဆက်လျှောက်ဆက်လျှောက်နဲ့ နှစ်ခွရောက်လာပြန်ရော.. ဒီတစ်ခါ ကောင်မလေး ဘယ်ဖက်ကွေ့ရမယ်ဆိုတာ မသိတော့ဘူး.. :P ဒါပေမယ့် .. သိတယ်မလား.. ထုံးစံအတိုင်း ရွှီးတာပေါ့.. ပီားပီား.. တည့်တည့်ကိုပဲလျှောက်ခိုင်းတာ.. အစ်မတွေခမျာ အပာုတ်မှတ်လို့လိုက်လာတယ်.. :P ရောက်ဖူးတာက ကောင်မလေးနဲ့ မချောဆိုတဲ့အစ်မတစ်ယောက်ပဲရှိတာလေ.. မချောကလည်း အနောက်မှာကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ကောင်မလေးကိုဆရာတင်တာပေါ့.. သိတယ်မလား.. :D အရှေ့ကလမ်းဆုံးနေမှ မချောကို စောင့်ရတယ်.. " အနောက်ကပြောတာ မကြားတော့ သွားပလေ့စေဆိုပြီး ဒီအတိုင်းပဲနောက်ကလိုက်လာတာတဲ့ " :P ပြီးမှ တခြားတစ်ဖက်ကိုသွားတော့ Bus-stop ကိုတွေ့တယ်.. အဲ့ဒီအခါမှ စိတ်ကိုဒုန်းဒုန်းချရတယ်.. ထပ်မှားရင်တေဘီ.. နေကပူပူနဲ့။.. အောက်က Labrador အဝင်ဝလေးကို လှလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်လာခဲ့တယ်..
ကောင်မလေးကတော့ ဓာတ်ပုံတွေ ပာိုရိုက်၊ ဒီရိုက်ပေါ့.. ဒီနေ့သွားတဲ့အကြောင်း ပို့စ်တစ်ခုတင်မယ်ဆိုပြီး အားခဲထားတာလေ.. ပဲာပဲာ..။ အရင်ဆုံး နေရာရှာရတယ်.. ရေလည်းဆော့လို့ရအောင်.. လူသိပ်မရှိတဲ့ နေရာလေးလည်းဖြစ်အောင်လေ..။ ကမ်းစပ်တစ်နေရာမှာ သွားတွေ့ပါတယ်.. အရင်ဆုံး ခဏထိုင်နားကြပြီး ပါလာတဲ့ သတင်းစာလေးတွေကို ခင်းပြီး ထိုင်ကြရော.. အစ်မတော်ကတော့ အရင်ဆုံး ဘီယာကစ်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ.. :D နေရာထိုင်ခင်းလည်း အားလုံးပြီးရော စားတော့မယ်ပေါ့..။ ကောင်မလေးတို့ကတော့ ဘာမှဝယ်မလာရဘူးဆိုတော့ စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်.. :P ဒါပေမယ့် မချောက ညီမလေးတို့စားကြ၊ အားမနာနဲ့လည်းဆိုတော့ စိတ်မကောင်းတာတွေအဝေးကိုပြေးရော.. ပီားပီား.. အရင်ဆုံး စားစရာတွေ အစီအစဉ်ချ.. အစိမ်းကြော်ရယ်၊ လက်ဖက်သုပ်ရယ်၊ ကြက်ကင်ရယ်...။ အကုန်လုံးကတော့ ဆာဆာနဲ့စားကြတယ်ထင်တယ်.. ကောင်မလေးတို့ညီအစ်မကတော့ စားလာတယ်လေ.. :P ဒါပေမယ့် သိတယ်မလား.. ပီားပီား.. နည်းနည်းပဲစားတယ်လို့ပြောမလို့ပါ.. စားကြည့်ကြပါလား.. မချောလက်ရာ.. တော်တော်ကောင်းတာ...
ထမင်းကတော့ ကုန်သွားပြီ.. :D
ကောင်မလေးတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်က ဘီယာမသောက်လို့ နို့ဘူးပဲဝယ်လာတယ်.. စားသောက်ပြီးတော့ ကောင်မလေးတို့ညီအစ်မ ကမ်းစပ်ကိုဆင်းတယ်.. ဓာတ်ပုံရိုက်ပေါ့ဗျာ... မေဇွန်ဆိုတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်နဲ့ ဖြိုးဆိုတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်လည်းပါတယ်။ အစ်မတော်နဲ့ မချောကတော့ သောက်ရင်း၊ စားရင်း limit ပြည့်နေတယ်ထင်တယ်။ ကောင်မလေးတို့ပဲ သွားကစားကြတာ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းနဲ့ ပာိုပြော၊ ဒီပြောပေါ့ဗျာ။ ကောင်မလေးက စကဒ်တိုတိုလေးဝတ်သွားတာဆိုတော့ ရေထဲဆင်းရလွယ်တယ်။ ရေကြိုက်တာနဲ့လည်း ကွက်တိပေါ့.။ ရေချိုးချင်လိုက်တာလေ.. အသည်းကိုယားနေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ချိုးလို့ရဘူးထင်တယ်။ စိတ်ပိန်ပါ့..။ ရေပဲဆော့ရတယ်.. တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ရွှဲလို့.။ ခြေထောက်တွေလည်း စပ်နေတာပဲ.. ခဏလောက်ရေကစားပြီးတော့ ကုန်းပေါ်ပြန်တက်၊ ခြေထောက်ဆေး. ခဏနားပြီးတော့ တောင်ပေါ်တက်ကြရောဆိုပါတော့.. ထုံးစံအတိုင်း မဖြိုးရယ် မမေဇွန်ရယ် ညီမလေးရယ်..။ ထုံးစံမပာုတ်တာက မမေဇွန်က မူးနေတယ်.. :D။ အောက်က လမ်းပြ stand လေးပါ..။
သစ်ကိုင်းကျိုးကျတတ်တယ်.. သတိထားပါတဲ့. :P
ပထမဆုံး ကောင်မလေးတို့သွားတဲ့နေရာက tunnel ကြီးပါ.. ပထမတော့ အထဲထိဝင်လို့ရမယ်မှတ်လို့ အောက်ဆင်းကြည့်ကြပါသေးတယ်.. သူက သော့နဲ့တောင် ခတ်ထားသေးတယ်.. original condition အတိုင်းပဲထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အောက်ကပုံက tunnel ကိုသွားတဲ့လမ်းပါ။
ပြီးတော့ ကောင်မလေးတို့ ဆက်လျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ပောာ့ဒီအောက်က cannon ကြီးကိုတွေ့ပါတယ်.. သူတို့ခေါ်တာကတော့ Gun Emplacement တဲ့.. အမြှောက်ကြီးက တကယ်အစစ်ကြီးထင်တယ်.. :D အောက်ကလူတွေကတော့ ရုပ်တုတွေပါ.. :) အမြှောက်ဆံကို ပေးနေကြတဲ့ပုံလေ..
ဆက်လျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာ storeroom လို့ခေါ်တဲ့နေရာကို ရောက်ပါတယ်.. ပထမကတော့ ဒီအတိုင်း room လေးပေါ့နော်.. နောက်မှ အန္တရာယ်ရှိလို့ အသေပိတ်ပစ်လိုက်တာတဲ့.။ အောက်နေရာကတော့ storeroom လို့ခေါ်တဲ့နေရာပါ..
နောက်တစ်နေရာကတော့ အောက်ကနေရာပါ.. ဘာနေရာလဲလို့ အတိအကျမသိပေမယ့် သေနတ်တွေ၊ အမြှောက်တွေကို သိမ်းတဲ့နေရာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ The Fourth Gun Position လို့တော့ ရေးထားတယ်.. ပြီးတော့ အောက်မှာ အမြှောက်နဲ့ သေနတ်တွေအကြောင်း ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။ နေရာက တော်တော်တော့ ကျယ်တယ်။
Fourth Gun Position
အဲ့ဒါလည်းပြီးရော အောက်မှပြထားတဲ့ အဝင်လမ်းကိုရောက်ရော.. :D တကယ်ဆို ဒီအဝင်လမ်းကနေ အရင်ဝင်ရမှာပါ.. အဝင်လမ်းက Labrador အဝင်ဝဘေးမှာရှိတာ.. ကောင်မလေးတို့နားတဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင် နည်းနည်းဝေးတာပေါ့.. အဲ့ဒါကို အနောက်ကနေ အရှေ့ကို ဝင်ကြတယ်.. ပဲာပဲာ..။
တောင်အောက်ကိုပြန်ရောက်တော့ ဘယ်ဖက်ကိုဆက်လျှောက်သွားတယ်.. အဲ့ဒီနေရာက စင်္ကာပူရဲ့ ဆိပ်ကမ်းပောာင်းလေ.. British Empire အောက်ကို မကျရောက်ခင်ကပေါ့..။ ခံတပ်ပောာင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်။ အောက်ကပုံက Labrador ဖက်ကနေရိုက်ထားတဲ့ Sentosa Island ရဲ့ပုံပါ..
ဒီအောက်ကတစ်ခုကတော့ Machine Gun Post တဲ့.. သူ့ပုံကိုတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့မေ့သွားတယ်.. မှတ်တမ်းလေးပဲ ကြည့်လိုက်နော်.. :)
ဒီအောက်ကပာာကြီးကတော့ ထူးဆန်းတယ်.. ဘာကြီးလဲမသိဘူး.. သိရင်ပြောပြကြပါဦး..
အဲ့ဒီဖက်ကလည်း ပြန်လာရော.. ကောင်မလေးတို့ ခဏနားကြတယ်.. ရေထဲတစ်ခေါက်ပြန်ဆင်းမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကြီးနဲ့ပေါ့.. အခုနနေရာကိုလည်း မမေ့နိုင်သေးဘူး.. လေအရမ်းတိုက်တော့ အရမ်းမိုက်တယ်.. ရေထဲတစ်ခေါက် ပြန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ ရေက တော်တော်ကျသွားတယ်.. စိတ်ညစ်လိုက်တာ.. ပြောမနေနဲ့.. အောက်ဖက်မှာ ကျောက်တုံးတွေပဲ ရှိတော့တယ်.. သဲကလည်း ကြမ်းလိုက်တာ.. နုတဲ့ဖက်က မနည်းလျှောက်ရတယ်.. ခြေထောက်တွေလည်း ပွန်းလို့.။ အသားတွေလည်း နီကုန်ပြီ.. ပင်လယ်လေကြောင့်ပဲ ဖြစ်မယ်.. ရေကလည်းကျဆိုတော့ လုပ်စရာကမရှိ.. စကားပဲထိုင်ပြောနေရတယ်.. နောက်ပြီးတော့ ကောင်မလေးနဲ့ ညီမလေးက ခရုခွံလေးတွေ လိုက်ကောက်တယ်.. လှမယ်ထင်တာတွေပေါ့.. သိပ်များများစားစားလည်း မတွေ့ပါဘူး.. နည်းနည်းတွေ့တာကို ရေနဲ့ဆေးပြီးတော့ အောက်ကလိုပုံစံ decorate လုပ်လိုက်တယ်.. လှလားမသိဘူး.. :P လက်ဆောင်နော်.. လက်ဆောင်.. ကြိုက်ရင်ယူသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ.. :D
ဒါက ကောင်မလေး အမှတ်တရရေးခဲ့တဲ့ စာတမ်း.. ဖတ်လို့ရရဲ့လားမသိဘူး..
အာထုနေတဲ့အချိန်မှာပဲ အိမ်ကဖုန်းဆက်တယ်.. ညနေစာအပြင်ကစားခဲ့.. အိမ်မှာဘာမှမချက်ဘူးတဲ့.. ကွဲရော.. ဗိုက်ကအသေဆာနေတာ.. အပြင်မှာစားရင် လုံးဝ အရသာလည်းမရှိဘူး.. စိတ်ပျက်ဖို့ပဲကောင်းတယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ပျော်တယ်လေ.. :P ခဏနားပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေသိမ်း.. တံတားပေါ်တက်ကြမယ်ပေါ့.. ပထမက sunset လေးမှာ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေး ရိုက်မယ်ဆိုပြီး အားလုံးက အားခဲထားကြတာ.. နေ့လယ်ပိုင်းကပဲ မိုးတွေအုံ့လာလို့ ဘာ sunset မှလည်းမရှိတော့ဘူး.. စိတ်ပိန်တယ်နော်.. ပာင်းပာင်း.. :( တံတားပေါ်ကနေပြီးတော့ ဓာတ်ပုံ ပာိုရိုက်ဒီရိုက်နဲ့..အပီား.. ကြည့်ကြဦးမလား.. :D အောက်ကပုံက တံတားပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ.. ရေတော်တော်ကျသွားတယ်လေ.. တကယ်ဆို ပာိုးအပေါ်ထိတက်တာ.. ပွာန်း.. သူတို့က jetty လို့ခေါ်တယ်..
ဒါက တံတားအဆုံးကို ရိုက်ထားတာ..
ဒါက တံတားထိပ်ဖက် နည်းနည်းရောက်သွားတော့ ရေကျတဲ့နေရာဖက်ကို တစ်ခေါက်ပြန်ရိုက်တာ.. ပိုလှလာတယ်နော်.. ရေကစိမ်းနေတာလည်းပါမှာပေါ့..
ဒါက Sentosa Island ဖက်ကို တစ်ချက်ပြန်ရိုက်တာ.. သိပ်မမြင်ရတော့ဘူးထင်တယ်.. ပီား..
တံထားထိပ်ဖက်လည်းရောက်ရော လူစုပြီးဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုရိုက်ရမှန်းမသိဘူး.. တစ်ယောက်မှလည်း မအားကြဘူး. ငါးမျှားနေတဲ့လူနဲ့.. အတွဲတွေနဲ့ဆိုတော့ နောက်ဆုံး မချောကပဲ တစ်ယောက်တစ်လှည့်ရိုက်မယ် ဖြစ်သွားရော.. မထူးပါဘူးဆိုပြီး ရိုက်လိုက်ကြတာ.. အောက်ကပုံဖြစ်သွားရော.. :D
ကောင်မလေးတို့ ပြန်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လာတော့ တံတားအစဖက်မှာ အခုမှလက်ထပ်နေတဲ့ မောင်နှံတစ်စုံနဲ့ တွေ့ပါလေရောဗျာ.. ဘယ်ရမလဲ.. ကောင်မလေးလည်း တစ်ပုံလောက်တော့ ရိုက်လာခဲ့တာပေါ့.. ပဲာပဲာ.. သူတို့မောင်နှံကိုကြည့်ရတာတော့ ကြည်နူးစရာလေးပါ.. အားကျသင့်တဲ့သူတွေ အားကျအောင် ထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်.. :P
အားလုံးပြီးတာနဲက ညနေ ၅း၃၀ နာရီလောက်မှ ပြန်လာကြပါတယ်။ ဒါက ကောင်မလေးတို့ အပြန်လမ်းပါ.. အားလုံးနွမ်းနယ်နေပေမယ့် ပျော်နေကြလိမ့်မယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်.. မျက်နှာလေးတွေကိုက ပြုံးလို့.. :P
အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကတော့ ကောင်မလေးတို့ညီအစ်မသုံးယောက် ညနေစာကို တစ်ဆိုင်ဆိုင်မှာ ဝင်ဆွဲလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ.. ပာင့်.. :(( ကောင်းလည်းကောင်းဘူး.. ဒါပေမယ့်ပျော်တယ်နော်.. မဖြိုးရေ.. ပဲာပဲာ..
၁။ အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း ဖုန်းဆက်တတ်သူ
- အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် သင်ပာာ အရင်လှုပ်ရှားတတ်သူဖြစ်တယ်။ သင်ပာာ အခွင့်အရေးကောင်းနဲ့ ကြုံရင် လက်မလွှတ်တတ်သူဖြစ်တယ်။ အချစ်စစ်သူရဲကောင်း အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ အချစ်အတွက် ပျော်ပျော်ကြီး စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံရဲသူဖြစ်တယ်။ ချစ်သူဆီက ဘာမှ မမျှော်ကိုးဘဲ ပေးဆပ်သူ၊ ချစ်သူကျေနပ်အောင် ကြင်နာသူ၊ ချစ်သူဆီက ဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရလည်း အပြစ်မတင်တတ်သူ ဖြစ်တယ်.။ အချစ်မှာ သင်ပာာ ပျော်တတ်ပေမယ့် အကြံတစ်ခုတော့ ပေးချင်ပါတယ်။ ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ သင့်ရဲ့ကြင်နာယုယမှုပာာ ချစ်သူအတွက် အကျင့်ဖြစ်မသွားပါစေနဲ့။ ချစ်သူဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပေးအယူမျှဖို့လိုတယ်။ သင့်အတွက် အလိုက်ဖက်ဆုံး လူပာာလည်း သင့်ကို ချစ်ခင်ကြင်နာတဲ့သူ၊ သင့်ကို တန်ဖိုးထားသူပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
- အချစ်ကြောင့် အရသာမပျက်တတ်သူ၊ ဘဝမှာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူဖြစ်ပြီး အချစ်မရှားသူဖြစ်တယ်။ ဘဝရဲ့ ထောင့် တစ်နေရာရာကနေ ကိုယ့်အတွက် ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာတတ်သူဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ အပြောအဆိုကို အလွန်ဂရုစိုက်တတ်သူ ဖြစ်တယ်။ ချစ်သူဘာကို အလိုရှိသလဲဆိုတာ သင်သိဖို့အတွက် အကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။ သင်ပာာ စန်းပွင့်သူဖြစ်ပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ချစ်တဲ့ အချစ်ကမှ သင်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့စိတ် တစ်စိတ်ထဲနဲ့ လူအများကို ခွဲဝေပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ။
- သင်ပာာ အချစ်လူရိုးကြီးပါ။ romantic မဆန်သလို နားဝင်ချိုတဲ့ စကားကိုလည်း ပြောခဲသူဖြစ်တယ်။ အချစ်ဆိုတာ ဘဝရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသလို့ ထင်သူဖြစ်တယ်။ သင်ပာာ အချစ်ကို ချစ်သူဖြစ်သော်လည်း အချစ်ကြောင့် ခေါင်းမစားသူဖြစ်တယ်။ သင့်အတွက် အကြံက အချစ်ကို သင်စတင်တော့မယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းအဆင့်ကနေ တဖြည်းဖြည်းစတင်တာာပာာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်း အဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့တော့ မရပ်စဲမိဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
- သင်ပာာ အချစ်ရဲ့ကျေးကျွန်ဖြစ်တယ်။ အချစ်ကို ကိုးကွယ်သူဖြစ်တယ်။ ချစ်သူက သင့်အပေါ် နည်းနည်းကောင်းပြ ကြင်နာပြတာနဲ့ သင်ပာာ သူ့အပေါ် ဆယ်ဆ ပြန်ကောင်းပြတတ်တယ်။ ချစ်သူအလိုရှိတာကို ပါးစပ်ပာလိုက်တာနဲ့ သင်က ဘာမဆို အိုခေစေရမယ့်ဆိုတဲ့ အစားမျိုးဖြစ်တယ်။ သင့်ကို အကြံတစ်ခု ပေးချင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အချစ်ဆိုတာ တရားမမျှတတဲ့ ကစားနည်းပါ။ ပေးဆပ်မှုနဲ့ ရယူမှုက ဘယ်တော့မှ တစ်ထပ်တည်းမကျဘူး။ ဒါကြောင့် အချစ်နွံထဲ အရမ်းနစ်မဝင်သွားစေနဲ့။ နောက် သင့်မှာ အချစ်အတွက် တိုင်ပင်ဖော်လေးလိုပါတယ်။ ဥပမာ- သူငယ်ချင်း သို့မပာုတ် အိမ်သူအိမ်သား၊ သူတို့က သင့်အတွက် အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
- ချစ်သူကိုယ်ပေါ်ကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာကို ရှာဖွေတတ်သူဖြစ်တယ်။ ချစ်သူလိုတစ်မျိုး၊ သူငယ်ချင်းလိုတစ်မျိုး ကူညီစောင့်ရှောက်တတ်သူလည်းဖြစ်တယ်။ တခြားသူနဲ့ ခင်မင်သွားလည်း ချစ်သူအပေါ် အချစ်မပြောင်းတတ်သူဖြစ်တယ်။ အကြံတစ်ခုပေးချင်တာက ချစ်သက်တမ်း ကြာလေလေ ချစ်သူရဲ့ အပြစ်အနာအဆာကို တွေ့မြင်နိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းလေလေဖြစ်တတ်တာကြောင့် ချစ်သူအပေါ် မကျေနပ်တာ၊ အလိုအကျတာကို စိတ်ထဲမှာသိမ်းမထားဘဲ ချက်ချင်း ထုတ်ဖော်ပြောသင့်တယ်။ အလိုမကျတာတွေကို ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းဆည်းထားရင် နောက်ဆုံးမှာ အင်အားပြင်းတဲ့ မီးတောင်အဖြစ် ပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ forward mail ကရလို့ တင်လိုက်တာပါ.. စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်. :)
အခုတလော ခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်လေးနဲ့ သွားဆင်နေတာရယ်.. ခံစားနေရတာကို ဂစ်တာနဲ့ဖြေဖျောက်နေရတာရယ်ကြောင့် ဒီပို့စ်လေးကို တင်ဖြစ်တာပါ.. အားလုံးလည်း သိကြမှာပါ.. Avril Lavigne ရဲ့ When you're gone ပါ.. နားဆင်ကြည့်ပါဦး.. =)
Vocalist- Avril Lavigne
A E F# V1
And make it OK I miss you
A E F#V2
I know we were, yeah yeah yeah yeah
အရမ်းကြီးချစ်လိုက်ရတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးဆုလဒ်က ဒါပဲလား.. ဒီကဗျာလေးကို ခံစားကြည့်ပေးပါဦး.. အရမ်းကြိုက်နေလို့...
.... ... ... ... ... ... ... ....
.... ... ... ... ... ... ....
ပန်းသီတော်ဘဝနဲ့ ငါ......... ပျော်ပါရစေ။
ငါ့ရဲ့ အလင်းတစ်စက်၊ နှင်းတစ်ဝက်နဲ့ကောင်မလေးရေ
နှစ်သက်လို့တင်လိုက်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ.. ကဗျာရှင်က အလင်းဖြူ လို့ ခေါ်ပါတယ်..း)
ကောင်မလေး ရေးထားတဲ့ မဆုံးတဲ့သီချင်း ဝတ္ထုကို ဖျက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲ့ဒီဝတ္ထုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကောင်မလေး စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရပါတယ်.. အမှန်လားလို့ မေးတဲ့သူတွေ ရှိခဲ့လို့ ကောင်မလေး ဖြေလည်းဖြေပေးခဲ့ပါတယ်.. သေချာတာတော့ ကောင်မလေး စိတ်ကူးနဲ့ ကောင်မလေး ရေးထားတာပါ.. အမှန်ပါလို့ မပြောပါဘူး.. ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင် ရေးတယ်ဆိုပါတော့.. ကောင်မလေး ဝတ္ထုမရေးတတ်သေးပါဘူး.. ရေးတတ်အောင် ရေးတဲ့သဘောပါ.. တစ်ယောက်ယောက်ကို အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ပြန်ပြောပြနေသလို ရေးတာပါ.. ရေးနေကျလူတစ်ယောက် မပာုတ်တော့ narrator တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရေးပြီးတော့ ပရိတ်သတ်ကို ဆွဲခေါ်သွားတဲ့သဘောပါ.. ပထမဆုံးရေးတာဆိုတော့လေ.. ဒါပေမယ့် ပထမဆုံးရေးတဲ့ အခေါက်မှာပဲ ပြဿနာတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ ကောင်မလေး စိတ်ဓာတ်ကျရပါတယ်.. စိတ်လည်းဆင်းရဲခဲ့ရတယ်.. အဲ့ဒါကြောင့် ပြီးအောင်ဆက်မရေးတာလည်းပါတယ်.. ပထမတော့ ဒီအတိုင်းထားမလို့ပဲ.. နောက်တော့ သည်းမခံနိုင်တော့တာနဲ့ ကောင်မလေး ဖျက်ဖို့ စိတ်ကူးတာပါ.. ပာုတ်တယ်မပာုတ်တယ်မသိ သတင်းတွေကလည်း တော်တော်လေးကို ဖောင်းပွနေတာပါ... ကောင်မလေးကတော့ ရှင်းပြသွားမှာ မပာုတ်ပါဘူး.. ရှင်းပြစရာမလိုအောင် ရှင်းနေပြီးသားမို့လို့ပါ.. ကောင်မလေးရေးတဲ့အထဲမှာ ကောင်မလေး သိသမျှ အသေးစိတ်ကအစ ပါရင်ပါနေလိမ့်မယ်.. ဒါက ကောင်မလေးတကယ်သိလို့ ရေးလိုက်တဲ့သဘောပါ.. တခြား အကန့်တွေမပါပါဘူး.. ကောင်မလေး ကောလပာာလတွေကို မခံစားနိုင်ပါဘူး.. ပထမကတော့ ခံနိုင်ရည်ရှိမယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ဒီအချိန်ထိ မဖျက်ဘဲထားခဲ့တာပါ.. အခုတော့ ဖျက်မှရတော့မယ့် အနေအထားမှာရှိပါတယ်.. ကောင်မလေးကို ဝေဖန်တဲ့လူတွေကို ကောင်မလေး ဘာမှမပြောလိုပါဘူး.. ဒါကိုဖျက်လိုက်ရင်တော့ ကောင်မလေးရင်ထဲမှာ နည်းနည်းပေါ့သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. နှမြောတော့ နှမြောတာပေါ့ဗျာ.. ပထမဆုံးရေးတာလည်းဖြစ်တယ်.. ပြီးတော့ ကောင်မလေး ဘယ်မှာမှ အကြမ်းရေးထားတာလည်း မရှိတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတာလည်း ပါပါတယ်.. ပထမကတော့ ဘာမှမပြောဘဲ ဖျက်လိုက်တော့မလို့ပါ.. ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးဘလော့ကို လာလည်တဲ့သူတွေကို မလေးစားရာကျမှာစိုးလို့ အခုလို အသိပေးတာပါ.. ပြီးတော့ ကောင်မလေးရေးထားတာလေးတွေကို တစ်နေရာမှာ ကူးပြီး အမှတ်တရသိမ်းထားချင်တာလည်း ပါပါတယ်.. နောက် ၃၊ ၄ရက်လောက်နေမှ ဖျက်မှာပါ.. အရေးကြီးလို့တော့ မပာုတ်ပါဘူး.. ကောင်မလေးအတွက်ကတော့ တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်.. အရေးကြီးပေမယ့်လည်း မတတ်နိုင်ဘူးလေ.. ဝေဖန်တဲ့ဒဏ်ကိုမှ မခံနိုင်တာ.. ကောင်မလေး ဝေဖန်တာကို တော်တော်ခံဖူးပါတယ်... ဒါပေမယ့် ဒီလောက်တော့ မဆိုးဘူး.. အခုတော့ အဆိုးဆုံး အခြေအနေရောက်လာလို့ပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. :)
ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ သိပ်ပြီးမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်.. =) ရေးတုန်းကတော့ ခံစားချက်ထည့်ထားတာပါ။
venus ရဲ့ နောက်ဆုံးညစာစားပွဲ
၂၀၀၆ မေကို ဘယ်သူဝယ်မှာတုန်း???
အရိုက်ခံရတဲ့အကြောင်း နောက်တစ်ခုကို ပြောပြမယ်နော်.. အပဲာ။ အဲ့ဒီညက တော်တော်အိပ်ချင်နေတာ။ မအိပ်ချင်တဲ့ ညတော့ မရှိဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီညက အဆိုးဆုံးပဲ။ ၉နာရီခွဲအောင် တော်တော်ကို စောင့်လိုက်ရတယ်။ ၉နာရီခွဲရင် ၁၅မိနစ် နားပေးမှာကိုး။ ၉နာရီလည်းခွဲရော အိပ်မလို့နေရာရှာတော့ အကုန်လုံးက နေရာဦးပြီးနေပြီ။ လူကမှ အိပ်ချင်နေပါတယ်ဆိုနေ..။ အဲ့ဒါနဲ့ မမွန်ကိုခေါ်ပြီး အခန်းထဲခဏပြန်အိပ်မယ်ပေါ့။ ၁၅မိနစ်လောက်ပဲ အိပ်မယ်ဆိုပြီး အိပ်လိုက်တာ။ နာရီဝက်ဖြစ်သွားတယ်. သိလား။ ကောင်မလေးမှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ဆရာမသိရင် တေဘီဆိုပြီး အောက်ဆင်းမယ်လည်း လုပ်ရော ဆရာမက လှေကားရင်းမှာ တုတ်ကလေးကိုင်ပြီး စောင့်နေပါလေရော.. အပီား။ ဒါပေမယ့် လူမရှိတဲ့ နေရာမှာ မရိုက်ဘူးနော်။ ယောက်ျားလေးဆောင်နဲ့ မိန်းကလေးဆောင်ကြားက လမ်းမှာ ရိုက်တာ။ ကောင်မလေးက အရင်ဆုံး အရိုက်ခံရတာပေါ့။ စိတ်ပိန်ပါ့.. ၃ချက်တောင်... တစ်ခုတော့ ကျေးဇူးတင်လိုက်ရတယ်။ အိပ်ချင်စိတ်လည်း ပျောက်သွားတယ်လေ.. :P ။ ဆရာမကတော့ ပြောလို့ မဆုံးဘူး။ ဆုယဉ်မွန်တို့ အိပ်ငိုက်ပုံများ ဆိုပြီးတော့။
စာမေးပွဲဖြေခါနီးကျတော့ ကွမ်းစားချင်တာ အရမ်းပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ ဆရာဦးထွန်းမြင့်က ကွမ်းစားပေမယ့် ကွမ်းယာစားတာမပာုတ်ဘူး။ ပာို.. အင်ဒီယားကလာတဲ့ အထုပ်ကလေးတွေ သိလားမသိဘူး။ အဲ့ဒါတွေကို စားတာ။ ကောင်မလေးလည်း စားချင်တာပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆရာနဲ့ စာလည်းသင်ရော နှစ်ကိုယ်ကြား ပြောရတယ်.. ဆရာ. သမီးလည်းစားချင်တယ်လို့.။ ဆရာမသိရင်တော့ ကောင်မလေးသွားပြီ။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ မသိအောင် ကပ်ပြောရတာ။ ပထမကတော့ ဆရာက အင်တင်တင်နဲ့. နောက်မှ တစ်ခါတစ်လေပဲလေ ဆိုပြီး ဝယ်လာခဲ့မယ်ဖြစ်သွားရော.။ ကောင်မလေးမှာ ပျော်လိုက်တာလေ. အရမ်းပဲ။ ညကျတော့ ဆရာက ဝယ်လာတယ်။ ၃ထုပ် ၁၀၀လေ.. ပဲာပဲာ။ ဆရာမ အမြဲလာမကြည့်နိုင်တဲ့ နေရာမှာ စာသွားကျက်တယ်. မမွန်ကိုပါခေါ်ပြီးတော့။ စာကြည့်နေရင်းနဲ့ ၁၅မိနစ်လည်း နားပြီးရော အဲ့ဒီအထုပ်ကို ဖောက်လိုက်ရော။ ငုံတာ တော်တော်အရသာရှိတယ် သိလား။ ကောင်မလေးက ပါးစပ်နီနေတာကို အရမ်းကြိုက်တာ။ နှုတ်ခမ်းနီ မပာုတ်ဘူးနော်။ ကွမ်းစားလို့ နီနေတဲ့ ပာာကိုပြောတာ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးက နီမှာမနီတာကို.. ပွာန်း။ မနီတာကို နီအောင် ဝါးလိုက်ရတာ။ နည်းနည်းစားတာနဲ့ မူးတယ်ဆိုတာ သိမှမသိဘဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ မနီနီအောင်ဆိုပြီး ဝါးတာ။ နှစ်ထုပ်ကုန်သွားတယ်။ တေရောလေ. မူးလိုက်တာ.. နေလို့ကိုမရဘူး။ အန်လည်းအန်တယ်.. ပဲာပဲာ။ အဲ့ဒါနဲ့ အပေါ်တက်ပြီး အိပ်ရတယ်။ ဆရာမမသိအောင်ပေါ့.. guide ဆရာမကိုတော့ ပြောထားရတယ်။ ဗိုက်အရမ်းအောင့်နေလို့ပါ.. မခံနိုင်တော့ဘူးလို့။ ငြိမ်းဆုလှိုင်ကလည်း စိတ်တွေပူပြီးတော့ ပရုတ်ဆီတွေ လိမ်းပေး၊ လင်းလင်းဦးကလည်း မျက်နှာမကောင်း.. ပီားပီား။ ဆရာမကတော့ ပြန်မသိဘူးလို့ ထင်တာပေါ့။ ဘယ်ပာုတ်မလဲ.. ကောင်မလေးကို လာမဆူတာပဲရှိတာ။ အကုန်သိတယ်လေ.. သိမှာပေါ့. ကောင်မလေး ကွမ်းထုပ်ဝယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ ဆရာဦးထွန်းမြင့်နဲ့က ဇနီးမောင်နှံကိုး. :P ။
ဂျွန်လ ၁၄ရက်နေ့က ကောင်မလေး ညီမလေးရဲ့ ၁၆နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပါ။ ကောင်မလေး ညီမလေး မွေးနေ့အတွက် ဘာလက်ဆောင်မှ မပေးနိုင်ပေမယ့် ကဗျာလက်ဆောင်လေးပဲ ပေးလိုက်တော့မယ်နော်.. ခံစားကြည့်ပေး ကြပါဦး.. တစ်ခါက တင်ထားဖူးတဲ့ ကဗျာပောာင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ...
ဝေးခဲ့ကြမှ ပျားသကာလို စကားလုံးတွေနဲ့ပေါ့...
ဝေးကွာခြင်းဆိုတာခါးသီးမှန်း သိခဲ့ရပြီးလို့လိုချင်နေတာ အတူနေဖို့ပါ...
အရေးကြီးတဲ့ စာမေးပွဲကြီး ပြီးရင်ပေါ့...
သေချာတာကတော့ မကောင်းဘူးဗျ.. အခုပြန်ဖတ်မှ မကောင်းမှန်းသိတယ်.. ဒါပေမယ့် အမှတ်တရတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက်ရော၊ သူ့မွေးနေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ရော တင်ဖြစ်သွားတာပါ. =)
ဒီနေ့က အရမ်းကိုထူးခြားတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ။ လူနှစ်ယောက် လေလှိုင်းပေါ်ကနေ နှလုံးသားချင်း နားလည်သွားတာ နှစ်ပတ်လည်ပြည့်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပေါ့။ မမြင်ဖူးဘဲ နားလည်သွားကြလေရဲ့။ မနက် ၁နာရီတောင် မထိုးသေးဘူးပဲ။ ဂုဏ်ပြုဖို့အတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ် တင်လိုက်မယ်နော်.. ခံစားကြည့်ပေးကြပါ။
ကောင်းမကောင်း မသိပေမယ့် ဂုဏ်ပြုတဲ့ ကဗျာလေးဖြစ်တဲ့အတွက် နှလုံးသားနဲ့ပဲ ခံစားပေးကြပါနော်.. =))
Happy Birthday Aye Myint Myat
ကောင်မလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း အေးမြင့်မြတ်ရဲ့ ၁၈နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ကောင်မလေးတို့ သူငယ်ချင်း ၁၂ယောက်ထဲက ၈ယောက်မြောက်ပေါ့.။ ကောင်မလေးလည်း ပို့စ်အသစ် မတင်ဖြစ်ဘူး။ အခုကတော့ အရမ်းခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် မရအရ တင်လိုက်ပါတယ်။ အေးမြင့်မြတ်က မန္တလေး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသူကြီးပေါ့။ ကောင်မလေးနဲ့ မတွေ့ရတာလည်း ဒီနေ့ ၁နှစ်ပြည့်တာပဲ။ မနှစ်က ကောင်မလေး ဒီကိုမလာခင် သူ့မွေးနေ့မှာ ပျော်ခဲ့ကြသလို တစ်သက်လုံး အမှတ်ရစေမယ့် အဖြစ်အပျက်လည်း ဖြစ်သွားခဲ့ဖူးတယ်။ ငယ်ဘဝတွေကိုလည်း လွမ်းသလို သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း လွမ်းတယ်။ ကောင်မလေး အရမ်းချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မွေးနေ့ဆိုရင် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲ ဖြစ်နေနေ မှတ်မိတတ်တယ်။ မှတ်မိတိုင်းလည်း မျက်ရည်ဝဲရတယ်။ လူကိုယ်တိုင် Birthday wish မလုပ်ရတဲ့အတွက်လေ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ အေးမြတ်။ နင့်မွေးနေ့မှာ ဘေးမှာဘယ်သူတွေ ရှိနေမှန်း မသိပေမယ့် အဝေးရောက်နေတဲ့ ငါကတော့ သတိရပေးလျှက်ပဲ..။ နင်ပျော်ရွှင်နေမယ်လို့ ငါယုံကြည်တယ်.။ ငါတို့ ၁၂ယောက် ပြန်ဆုံဖို့အတွက် နင်ကြိုးစားရမယ်နော်..။ ငါနင့်အတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ် လက်ဆောင်ပေးမယ်။................
အေးမြတ်အတွက် ရေးထားတဲ့ ကဗျာလက်ဆောင်လေးကို ခံစားကြည့်ပေးကြပါနော်..
Happy Birthday အေးမြတ်
ဘာလက်ဆောင်မှတော့ မပေးနိုင်တော့ဘူးအေးမြတ်ရာ.. ဒီကဗျာလေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်တော့နော်..
(၁၀.၂.၂၀၀၈ မှာ ၁၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ သူငယ်ချင်း အေးမြင့်မြတ်အတွက်.)
ဒီနေ့က ကောင်မလေးတို့ သူငယ်ချင်း ၁၂ယောက်ထဲက ၇ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ အောင်ခန့်ဖြိုးသိဏ်းရဲ့ ၁၈နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါ။ မနှစ်ကတော့ ကောင်မလေးရယ်၊ မှုံရယ်၊ လင်းလင်းဦးရယ် သူ outpass ထွက်တော့ သူ့အတွက် လက်ဆောင်တွေယူပြီးတော့ သွားတွေ့ကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက outpass မထွက်ရဘူး။ စစ်ရေးပြတာ ဘာဖြစ်လို့ဆိုလား.. outpass ပိတ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီကတည်းက သူနဲ့မတွေ့တော့တာပဲ။ ၁နှစ်ကျော်ပြီဆိုပါတော့။ အရမ်းခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကောင်မလေးထက်ငယ်တယ်ဆိုတော့ မောင်လေးပေါ့။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို အရမ်းကစားကြတာ။ သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လေ.. ဘောလုံးလည်းလိုက်ကန်တာပဲ။ သူတို့ကလည်း ကောင်မလေးတို့နဲ့ ကြိုးခုန်တာပဲ။ ပြန်တွေးတိုင်းလည်း ငယ်ဘဝကို သတိရတယ်။
သူက ၅တန်းရောက်တော့ သူ့အမေတာဝန်ကျတဲ့ မြင်းခြံကို လိုက်သွားရတယ်။ ကောင်မလေးနဲ့လည်း ကျောင်းကမတူတော့ မသိလိုက်ဘူး။ နောက်ပိုင်းတော့ စာရေးပါတယ်။ ကောင်မလေးတို့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ငယ်ဘဝတွေလည်း အဲ့ဒီကတည်းက ပျောက်ကုန်တာပဲ။ သူက ၁၀တန်းပြီးတော့ မေမြို့ကိုပြန်လာတယ်။ စစ်တက္ကသိုလ်မှာ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းတက်မလို့။ ကောင်မလေးနဲ့တော့ မတွေ့လိုက်ရပါဘူး။ ကောင်မလေးက ရန်ကုန်ရောက်နေတာ။ ကောင်မလေးပြန်လာတော့ သူတို့ကတက်နေပြီ။ အပတ်စဉ်၅၂ပေါ့။ နောက်မှ ကောင်မလေးနဲ့ ပြန်တွေ့တယ်။ သင်္ကြန်တုန်းကလည်း ခိုးပြီးပြန်လာတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကလည်း ကောင်းကောင်းမပျော်လိုက်ရဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်၁၈နှစ်ပြည့်တယ်ဆိုတာ လူကြီးဘဝကို ရောက်လာတာနဲ့ အတူတူပဲ။ ရင့်ကျက်ရတော့မယ်လေ။ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းတက်နေတဲ့ ဗိုလ်လောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ရင့်ကျက်သင့်နေပါပြီ။
၁။ ငါ့သူငယ်ချင်းကြီး လိုရာပန်းတိုင်ကို အခက်အခဲမရှိ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ။
၂။ မိသားစုနဲ့လည်း အမြန်ဆုံး အတူတူနေနိုင်ပါစေ။
၃။ ကြိုးစားနေတဲ့ အချစ်ရေးကိစ္စလည်း အောင်မြင်ပါစေ။ (သိပ်တော့မထင်.. :P )
၅။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးအကြီးဆုံးက သူငယ်ချင်း ၁၂ယောက်လုံး မြန်မြန်ဆုံချင်တယ်ပာာ။
ဒါတွေက သူ့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေပါ.. ကိုဖြိုး.. ကြိုက်တာယူနော်.. :P
ဒီနေ့ မိခင်များနေ့လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ.. မနှစ်ကတော့ ကောင်မလေးနဲ့မေနဲ့ ဘုရားကျောင်းကိုသွားပြီး ဝတ်ပြုဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်။ ဒီနှစ်တော့ ဘာလုပ်ရမှန်းလည်း မသိဘူး။ မေ့အတွက် အမှတ်တရ တစ်ခုခု ဝယ်ပေးချင်ပါတယ်။ ကောင်မလေး လခကလည်း မရသေးတော့ တော်တော်ခေါင်းစားရတဲ့ အဖြစ်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် post-card လေးတစ်ခုတော့ ပေးဖြစ်အောင်ပေးမယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်း ကောင်မလေးနဲ့ မေနဲ့က သိပ်တည့်တာမပာုတ်ဘူးဗျ။ အဓိကကတော့ ကောင်မလေးပေါ့။ အရင်ကတည်းက မေနဲ့ဖေက ကောင်မလေးကို မချစ်ဘူးထင်ခဲ့တာတွေ၊ စိတ်ခုစရာ တော်တော်များများရှိခဲ့တာတွေက မေ့ကျေးဇူးတွေကို ဖုံးဖိဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကောင်မလေးကို တော်တော်များများက နားချခဲ့ဖူးတယ်။ မိဘတွေကို အထင်မမှားသင့်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ ကောင်မလေးကလည်း နားထောင်တဲ့အနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ အထင်မမှားအောင်နေပါတယ်။ အထင်မမှားအောင် နေလာတာနဲ့အမျှ ကောင်းကွက်လေးတွေကို ပိုသိလာသလိုပဲ။ အရင်တုန်းကတော့ ညပိုင်းရေချိုး၊ ခေါင်းလျှော်ပြီး ဆံပင်မခြောက်သေးဘဲနဲ့ အိပ်လိုက်တိုင်း ဆူတာတွေကို တော်တော်မုန်းမိပါတယ်။ ကောင်မလေးကို ဆူတယ်ဆိုပြီးတော့လေ။ အခုကျတော့ အဲ့လိုမပာုတ်တော့တဲ့အပြင် ပီတိဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာ။ တစ်ခါတစ်လေများ အဲ့လိုအပြောခံရအောင်ကို နေနေတတ်သွားတယ်။ ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတော့ ကိုယ်ကြည်နူးရတယ်ဆိုတာ ဓမ္မတာပါလားဆိုတာ အခုမှပဲသိရတယ်။
နောက်ပြီး အိမ်အလုပ်တွေပေါ့နော်။ ကောင်မလေးက လုံးဝဝါသနာမပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက် ပင်ပန်းလဲဆိုတာတော့ ခန့်မှန်းတတ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာပဲကိုယ်သိတာပေါ့နော်။ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာ သိလာသလိုပဲ။ စိတ်လည်းညစ်သွားတယ်။ နောက်ပြီး အိမ်ရှင်မဘဝကိုလည်း စိတ်ကုန်သွားတယ်။ တချို့တွေကတော့ ပြောကြတယ်။ မိခင်ဘဝရောက်လာရင် မိခင်တွေရဲ့စိတ်ကို သိနိုင်တယ်တဲ့။ ကောင်မလေးကတော့ မိခင်ဘဝတောင် မရောက်ချင်တော့ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုဝဿန်ဦးဆီက တိုးအေးပေါ်မှအိုမိခင် ဆိုတာလေးကိုလည်း သတိရတယ်။ မိခင်ရဲ့ မေတ္တာပေါ့နော်။ သူများတွေ မိခင်အကြောင်းဖွဲ့နွဲ့ပြီးရေးထားရင် ကောင်မလေးတော့ ဘယ်လိုမှကို မခံစားရဘူး။ မိခင်နဲ့ တစ်ခါမှ မခွဲဖူးလို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ၁၀တန်းတုန်းကပဲ တစ်နှစ်လုံးခွဲဖူးတာလေ။ အဲ့ဒီတုန်းကလည်း တစ်ပတ်ကို ၃ခေါက်လာတွေ့ခိုင်းတော့ ခွဲရတယ်လို့ကို မထင်တော့ဘူး။ ဒီကိုရောက်လာတော့ ခဏပြန်သွားတဲ့ ၁လ၊ ၁လခွဲလောက် ခွဲရတုန်းကကျတော့ တော်တော်ကို နေလို့မကောင်းတာ။ ဘာဖြစ်လို့မှန်းလည်းမသိဘူး။ ပြီးတော့ မေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကဗျာတစ်ပုဒ်မှကို မရေးဖူးဘူး။ ရေးဖူးချင်ပေမယ့် ဘာရေးရမှန်းလည်းမသိဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မေ့ကို လက်ဆောင်ဝယ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ blouse တစ်ထည်ရယ်၊ ဘောင်းဘီရှည်တစ်ထည်ရယ်။ ပြန်လာတော့ မေကမရှိဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ ဝယ်လာတဲ့ post-card မှာ စာရေးပြီးတော့ မေတို့အခန်းထဲ တိတ်တိတ်လေး သွားထားလိုက်တယ်။ မေတို့ပြန်လာလာချင်းတော့ ကောင်မလေးက အပြင်သွားတာပေါ့။ ကောင်မလေးပြန်လာတော့ မေ့မျက်နှာက ခါတိုင်းထက် ပိုပြီး လန်းဆန်းနေသလိုပဲ။ ကောင်မလေး စိတ်ထင်ပေါ့နော်။ ညီမလေးကတော့ မနာလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပထမဆုံး မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြည်နူးမှုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ မေက ကောင်မလေးအတွက်တော့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ ကောင်မလေး ပျော်ပါတယ်။ ကောင်မလေးအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့အမေတစ်ယောက်ကို ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်.................
နောက်ကျတော့ ကျူရှင်က ဆရာကန်တော့ပွဲလုပ်တယ်။ ကောင်မလေးလည်း ဆုတွေဘာတွေယူပေါ့။ မုန့်တွေစား၊ စကားတွေပြော၊ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်... အဆင်ကိုပြေနေတာပဲ။ ပြဿနာက နေ့လယ်ပိုင်းမှာစတာ။ ကျူရှင်ကကျောင်းသားတွေက အိမ်အရမ်းပြန်ချင်ကြတယ်လေ။ အမြဲတမ်း အိမ်ပြန်ဖို့ အကြံဥာဏ်ထုတ်နေကြတာ။ အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ အကွက်ကောင်းတွေ့သွားရော။ ဆရာကန်တော့ပွဲပြီးတာနဲ့ ယောက်ျာလေးတွေက အိမ်ပြန်ကြမယ်၊ မိန်းကလေးတွေက လျှောက်လည်ကြမယ်ပေါ့။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်တော့ ပာုတ်နေတာပဲ။ ဆရာမကို ကန်တော်ကြီးလိုက်ပို့ခိုင်းတာ ဆရာမက မပို့ဘူးပြောလို့လေ။ အကုန်လုံးက ကိုယ့်ပာာကိုယ်ပဲ စီစဉ်ကြတော့တာ။ ဆရာမကပြောတယ်.. ဆရာကန်တော့ပွဲပြီးတာနဲ့ အိပ်တော့တဲ့။ အရင်လိုနေ့မျိုးတွေဆို အကုန်လုံးက သွားအိပ်တော့တာလေ။ အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ တစ်ယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ ပြန်ကုန်ကြတာ။ ပြန်တဲ့ပုံစံကလည်း ဒီလိုမျိုးဗျ။ မိန်းကလေးတွေက အပေါ်တက်ပြီးတော့ အင်္ကျီလဲကြတယ်။ ဘောင်းဘီတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့။ ဘောင်းဘီမဝတ်ရတာလည်း ကြာပြီမပာုတ်လား။ နောက်တော့ အပေါ်ကနေ ကျောင်းစိမ်းထမီထပ်လိုက်တယ်။ ဆရာမအလစ်ကို ချောင်းနေကြတာပေါ့နော်။ အောက်ဆင်းလိုက်၊ အပေါ်တက်လိုက်နဲ့ မျက်စိကိုနောက်နေတာပဲ။ မိန်းကလေးတွေက နှစ်ဆောင်နေရတာလေ။ ကောင်မလေးတို့က ၉တန်းဆောင်ရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာ။ တခြားမိန်းကလေးတွေက ၈တန်းဆောင်ဘေးမှာ။ အဲ့ဒါကို ၈တန်းဆောင်ဘေးက မိန်းကလေးတွေက တုပ်တုပ်တောင်မလှုပ်ဘူး၊ ကောင်မလေးတို့ဖက်က မိန်းကလေးတွေက လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ ပာိုကြည့်၊ ဒီကြည့်ပေါ့။ ကောင်မလေးတောင် အင်္ကျီလဲထားသေး. :P ။ ဆရာမမရှိတာသေချာရင် ထွက်ကြမယ်ပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ ဆရာမ လစ်မလစ်ကို ကောင်မလေးက စောင့်ကြည့်ပေးရတာ။ ယောက်ျားလေးတွေကလည်း သူတို့အစီအစဉ်နဲ့ သူတို့လေ။ သူတို့ပြန်မယ်ဆိုတာ ကောင်မလေးတို့မသိသလို ကောင်မလေးတို့သွားလည်မယ်ဆိုတာလည်း သူတို့မသိဘူး။ ကောင်မလေးတို့ကတော့ လစ်တော့မယ်ပေါ့။ ဆရာမလည်း လစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကောင်မလေးတို့ထွက်ကြတာ။ ကောင်မလေးနဲ့ လင်းလင်းဦးက ဆရာမကို တော်တော်ကြောက်တော့ နောက်ဆုံးလေးမှာ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်နဲ့ ပာိုကြည့်၊ ဒီကြည့်ပေါ့။ နောက်တော့ အရှေ့ကအဖွဲ့တွေနဲ့ နည်းနည်းဝေးသွားတယ်။ နည်းနည်းဝေးသွားတဲ့အချိန်မှာ ကောင်မလေးနဲ့လင်းလင်းဦးနဲ့ တိုင်ပင်ရပြီပေါ့.. ဆရာမပြန်သိရင် ကွိတော့မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်လေ.. :D ။
အဲ့ဒါနဲ့ သူကလည်းကြောက်၊ ကောင်မလေးကလည်းကြောက်ပေါ့.. ဘာလုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး။ သူတို့နဲ့သာ တဖြည်းဖြည်းဝေးအောင် လုပ်နေရတာ။ သူတို့ကတော့ မြန်မြန်လာဆိုပြီးတော့ အော်ခေါ်နေလေရဲ့။ ကောင်မလေးတို့ကသာ မသွားရဲတာ။ လမ်းအကွေ့လည်းရောက်ရော ကံကောင်းချင်တော့ အာကာသုခနဲ့ တွေ့တယ်။ သူနဲ့စကားပြောသလို ဘာလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းဝေးကျန်ခဲ့ရော။ အာကာသုခကိုလည်း အကူအညီတောင်းရတယ်။ အရိုက်ခံမယ့်အတူတူ အပြင်သွားလည်မယ့်အစား အိမ်ပြန်ကြမယ်ပေါ့။ အာကာသုခကို လိုက်ပို့ခိုင်းတာ။ သူ့မှာက ဆိုင်ကယ်ပါတယ်လေ။ သူက နောက်တစ်ခေါက်လာကြိုမယ်တဲ့.. သူ့အမေခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စရှိသေးတယ်ဆိုပြီး ကောင်မလေးတို့ကိုစောင့်ခိုင်းတာ။ အဲ့ဒါနဲ့ မသိမသာ အဆောင်ကိုပြန်ပြေးရတယ်။ သူတို့ကတော့ စိတ်ဆိုးနေမှာ အသေအချာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ဖြိုးဝေထွန်းနဲ့သွားတွေ့တယ်။ သူကလည်း သွားလည်ချင်တယ်။ စက်ဘီးလည်းရှိတယ်ပေါ့။ ကောင်မလေးလည်း စဉ်းစားရပြီ။ သွားရင်ကောင်းမလား . မကောင်းဘူးလားဆိုပြီး.. နောက်ကျတော့ မသွားဖြစ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ အပေါ်လေးတက်အိပ်မယ်ဆိုပြီး တက်ခါနီးမှာ ဇင်မာအောင်နဲ့တွေ့တယ်။ သူက ကျူရှင်ရှေ့က ရဲစခန်းဝင်းထဲမှာနေတာလေ။ နီးနီးလေးပဲ.. အိမ်အနောက်ဖက်ကထွက်လိုက်ရင် ကျူရှင်ကိုရောက်တာကိုး။ အဲ့ဒီမှာ သူ့အိမ်လိုက်လည်ဖို့ စိတ်ကူးရတယ်။ ကောင်မလေးနဲ့ လင်းလင်းဦး ထွက်ကြတာပေါ့။ အေးဆေးပဲ.. သူ့အိမ်ရောက်တော့ သူ့အမေက ကော်ဖီနဲ့မုန့်နဲ့ကျွေးတယ်။ သီချင်းတွေဆို. ပာိုလုပ်ဒီလုပ်ပေါ့.. စာမေးပွဲနီးပြီဆိုတော့ အိမ်လည်းမပြန်ရ၊ အဲ့ဒါတွေလည်းမလုပ်ရတာ ကြာပြီဆိုတော့ ပေါက်ကွဲကြတာပေါ့။ ပြီးတော့ စက်ဘီးတစ်ဘီးငှားပြီး အဲ့ဒီနားလေးက ဖေ့အမျိုးအိမ်ကိုသွားလည်တယ်.. စကားတွေဘာတွေပြောပြီးတော့ ပြန်လာကြတာပေါ့။ ပြီးတော့ ဇင်မာအောင်အိမ်ဝင်။ အိပ်ရာက ၄နာရီထရမှာဆိုတော့ အမီပြန်ပြေးရတာလေ။ (၃း၃၀)နာရီမှာ ပြန်ပြေးတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ ကောင်မလေးတို့အပေါ်ရောက်လို့ အိပ်ရာပေါ်လှဲတာတောင် မကြာသေးဘူး။ ဆရာမက တက်လာပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း "ထကြမယ်ပော့ ထကြမယ်" ဆိုပြီးတော့ အော်ပါလေရော။
တကယ်သိလား.. ကောင်မလေးရော လင်းလင်းဦးရော တုန်သွားတာ။ အသံကြားတာနဲ့ အခုမှနိုးတဲ့စတိုင်လ်နဲ့ ဆုရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ သိမ်းလို့။ အပီား.. ဆရာမက ပြောပြောဆိုဆို တက်လာပြီးတော့ ကောင်မလေးတို့အခန်းကို အရင်မကြည့်ဘူး. ပာိုဖက်ကို သွားကြည့်တာ။ ဆရာမမျက်လုံးပြူးသွားရော။ ကောင်မလေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ မင်သေသေနဲ့။ ဆရာမလည်းမေးရော .. "မသိဘူးဆရာမ။ သမီးတို့လည်း အခုမှနိုးတာ" ပေါ့.. :P ။ ဆရာမ စိတ်ရှုပ်သွားပြီ။ ကောင်မလေးတို့ မျက်နှာသစ်ပြီးတော့ study ဝင်တော့ ယောက်ျားလေးတွေလည်း တစ်ယောက်မှမရှိဘူး။ မေးကြည့်တော့ အကုန်လုံးပြန်သွားပြီတဲ့။ ယောက်ျားလေးတွေက ၄ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တာ။ မိန်းကလေးတွေက ကောင်မလေးတို့နှစ်ယောက်ရယ်၊ ၈တန်းဆောင်ဘေးက ၅ယောက်လောက်ရယ်ပဲ ကျန်ခဲ့တာ။ ဆရာမ ဒေါကန်သွားပြီ။ guide တွေကလည်း ဆရာတစ်ယောက်၊ ဆရာမတစ်ယောက်ပဲကျန်တာ။ ကျန်တဲ့ ဆရာမတွေ အကုန်အိမ်ပြန်။ နောက်ကျမှ သိရတာက ဆရာမက ကောင်မလေးတို့ကို အိပ်ချိန်ပြီးတာနဲ့ ကန်တော်ကြီးကို ပို့မလို့တဲ့.. ဗြဲ..... :((( ။ သူတို့ကြောင့်လို ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ စာကျက်ရတာလည်း စိတ်မပါတော့ဘူး။ မိန်းကလေးလည်း နည်းတော့ ပာိုအကြောင်း၊ ဒီအကြောင်း စုပြီး ပြောရတယ်။ နောက်တော့ ထမင်းစားဖို့ အကြော်လည်းစားချင်တာနဲ့ လူစုပြီး အကြော်သွားဝယ်စားတော့ အကြော်ဆိုင်မှာ ချယ်ပုကိုတွေ့တယ်လေ။ စကတ်ဒူးဖုံးလေးနဲ့. :D ။ ဆရာမကိုပြောလိုက်ရင် ဘယ်လောက်ဒေါကန်နေမလဲ မသိဘူး။ သူ့ကိုတွေ့တာနဲ့ မေးကြည့်တော့ သူတို့ guide တွေလည်း ကန်တော်ကြီးကို သွားလည်တော့ ယောက်ျားလေးအဖွဲ့နဲ့ မိန်းကလေးအဖွဲ့ တွေ့ကြလေသတည်းတဲ့။ တကယ်ဆို ချိန်းထားတာလည်းမပာုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီမှာ သူတို့သုံးဖွဲ့ လျှောက်လည်ကြတယ်တဲ့။ ပျော်စရာကြီးဆိုတာက ပါသေး. ပွာန်းးးးးးးး ။ အကြော်ဝယ်ပြီး ပြန်လာတော့ ထမင်းစား။ ညပိုင်းကျတော့ ဆရာမက ကျောက်တောင်ဘုရားကို လိုက်ပို့ခိုင်းတယ်။
ကောင်မလေးတို့တန်းစီပြီး သွားကြတာပေါ့။ ကောင်မလေးတို့ လူစုလည်းနည်းတော့ မိန်းကလေးနဲ့ ယောက်ျားလေး ရောပြီးစီရတယ်။ အကုန်လုံးကတော့ ပြောကြတာပေါ့။ သူတို့ကြောင့် ငါတို့ပါမလည်ရဘူးဆိုပြီး။ ပြောရင်းနဲ့ ကျောက်တောင်ဘုရားမှာ မီးပျက်နေတာနဲ့ D.S.A ရှေ့က ကြေးရုပ်ကြီးသုံးရုပ်ရှေ့ကို သွားကြတယ်။ အသွားမှာပဲ လူတစ်ယောက် လမ်းပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီး ပွဲချင်းသေနေတာကို တွေ့တယ်။ နောက်တော့ ရဲတွေရောက်လာပြီး အလုပ်ရှုပ်နေတာပေါ့။ အသက်က ၂၀လောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့။ ကျောင်းသားလို့ပြောတာပဲ။ သွေးတွေကလည်း မြင်မကောင်းဘူး။ ကြေးရုပ်သုံးရုပ်ရှေ့လည်းရောက်ရော ရောက်တတ်ရာရာတွေ ထိုင်ပြောကြတာပေါ့။ ပျော်စရာကြီး။ နောက်တော့ guide ဆရာမက အခုန accident ကိုမြင်ပြီးတော့ ရင်တွေတုန်လာတာနဲ့ ကျောက်တောင်ဘုရားပေါ်လည်း မတက်ရတော့ဘူး။ ပြန်ရော။ အဲ့ဒီမှာ ဖြိုးဝေထွန်းရဲ့ အဒေါ်လည်း ရောက်လာတယ်။ သူ့တူပျောက်နေလို့တဲ့။ အဲ့ဒီညကတော့ ဘာပဲပြောပြော study စောစောနားတယ်။ မနက်ကျတော့ ညကပျောက်သွားတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ အလျှိုလျှို ပြန်လာကြတာပေါ့။ ကောင်မလေးနဲ့ လင်းလင်းဦးကိုလည်း မျက်စောင်းတွေထိုး၊ မကြည်သလိုလုပ်ပြနဲ့ သူတို့ကိုကြည့်ရတာ စိတ်မောပါ့။ ကောင်မလေးတို့ကတော့ မသိသလိုပဲ။ ဆရာမက ဘာမှမလုပ်သေးဘူး။ ကျောင်းလည်းတက်ရဦးမှာဆိုတော့လေ။ ညပိုင်းအထိလည်း ဘာမှမလုပ်သေးဘူး။ ကောင်မလေးကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကွန်ပျူတာခန်းထဲမှာပေါ့။ ၈နာရီလောက်လည်းကျရော ဆရာမအသံကြားရတယ်။ ကောင်မလေး စာကျက်တဲ့အခန်းက ယောက်ျားလေးဆောင်နဲ့ ကပ်ရပ်ကိုး။ ဆရာမက ဆူနေတာ။ မနေ့က ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီး သေနေတာကို ကြားလိုက်တော့ ငါ့ကျောင်းသားများလားလို့ဆိုပြီး စိတ်ပူရတယ်. ဘာညာပေါ့။ ပြီးတော့ "မနေ့က အိမ်ပြန်တဲ့ကောင်တွေ အခုချက်ချင်း ပုဆိုးတွေ၊ ဘောင်းဘီတွေ အကုန်ချွတ်ပြီး အခန်းရှေ့ကိုထွက်ခဲ့စမ်း" တဲ့။ ကောင်မလေးတောင် နည်းနည်းလန့်သွားတယ်။ ဘာများလုပ်မလဲမသိဘူးလို့။ နောက်ကျတော့ ယောက်ျားလေးတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကွန်ပျူတာခန်းကိုဖြတ်ပြီး အပေါ်ထပ်တက်၊ ပုဆိုးလဲလာကြတယ်. :D ။ ကောင်မလေးမှာ ရယ်ချင်လိုက်တာလေ. အရမ်းပဲ. အပီား။ မင်းသူက အရင်ဆုံးပဲ။ ခြေသလုံးပုလွေရိုးနဲ့ အရင်ဆုံးအရိုက်ခံရတာ။ ပထမ ကွန်ပျူတာခန်းတံခါးကို ဖွင့်ထားတာ။ တုံးလုံးချွတ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ လန့်ပြီး တံခါးကိုပိတ်လိုက်ရရော။
ယောက်ျားလေးကတော့ တော်တော်များတယ်။ နောက်တော့ မိန်းကလေးအလှည့်။ အခန်းထဲဝင်သွားပြီး ဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူး။ နောက်တော့ မိန်းကလေးအကုန်လုံးနီးပါး အပြင်ကိုထွက်လာကြတယ်။ ထမီလေးတွေ စွန်တောင်စွဲလို့။ နောက်တော့ ပေါင်ရင်းအထိလှန်ပြီးတော့ အရိုက်ခံရတာ။း( ၁၀ချက်တောင်။ ရိုက်လို့လည်းပြီးရော ကောင်မလေးလည်း သူတို့အခန်းထဲဝင်ရော။ အခြေအနေအေးဆေးပြီဆိုတာ သေချာမှ ဝင်တာလေ။ နို့မို့ဆို ကောင်မလေးပါ ရောအရိုက်ခံရရင် ဒုက္ခ။ အထဲလည်းဝင်လိုက်ရော လားလား.. ငိုနေကြတာလေ. ပြောမနေနဲ့။ တစ်ယောက်ဆို အထိကိုမခံနိုင်ဘူး။ စာလည်း ဆက်မကျက်နိုင်ဘူး။ ကောင်မလေးကတော့ အကျိုးအကြောင်း မေးရတာပေါ့။ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာကို။ သိနေပေမယ့် သူတို့ပြောတာလည်း ကြားချင်သေးတာကို။ သူတို့ကတော့ အပြည့်အစုံပြန်ပြောပြပါတယ်။ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပေါ့။ ကောင်မလေးနဲ့ လင်းလင်းဦးကို မကြည်တဲ့သူတွေလည်း ပြန်ကြည်လာရတယ်လေ။ ဘာမှမပြောတော့ဘူး။ သူတို့အကြောင်းကိုသာ အကြောင်းစုံဖွင့်ပာနေတော့တယ်။ ညပိုင်းကျတော့ စောစောနားပေးတယ်။ ဆေးလိမ်းရမယ်ဆိုတာ သိလို့နေမှာ။ guide တွေကိုလည်း ဆူတယ်လို့ပြောတယ်။ ညပိုင်း အိပ်ခါနီးကျတော့ သူတို့ရဲ့ အရှိုးရာတွေကို ကြည့်ရတာပေါ့။ စိတ်ကိုမချမ်းသာဘူး။ အသားဖြူတဲ့သူတွေများ သွေးကိုစို့လို့။ ဆရာမ ဘယ်လောက်စိတ်တိုတယ် မတိုတယ်ဆိုတာ။ ငြိမ်းစုလှိုင်ဆေးပါလို့ တော်သေးတာပေါ့။ ငြိမ်းစုလှိုင်လည်း သိပ်မသက်သာဘူး။ သူလည်း တော်တော်ခံလိုက်ရတယ်။ ပထမဆုံး အခန်းတူတဲ့ ငြိမ်းစုလှိုင်ကို ဆေးလိမ်းပေးပြီးတော့ ပာိုဖက်အခန်းကို ကောင်မလေးနဲ့ လင်းလင်းဦးနဲ့ နှစ်ယောက် ပြေးရတယ်။ ဆေးလိမ်းပေးရတယ်။ ကောင်မလေးတို့နှစ်ယောက်ပဲ အကောင်းရှိတာကိုး။ အော်လိုက်ကြတာလည်း ပြောမနေနဲ့။ အဲ့ဒါတော့ သူတို့ တော်တော်လေးကို မှတ်သွားကြတာ. နောက်ဆို ဘယ်တော့မှအဲ့လိုလုပ်ရဲမှာ မပာုတ်တော့ဘူး။ ကောင်မလေးလည်း ဘုရားသာတ.မိတော့တယ်။ တကယ်လို့ ကောင်မလေးသာ လိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် နှစ်ဆအရိုက်ခံရမှာ သေချာတယ်.. အမလေး .. ပြောရင်းနဲ့တောင် ကြောချမ်းလာပြီ.း(((
ညကျတော့ ကောင်မလေးက အတန်းခွဲပြီးတော့ စာကျက်ရပြီ။ ကောင်မလေးက ကွန်ပျူတာခန်းထဲ သွားရပြီပေါ့။ ကွန်ပျူတာခန်းက ယောက်ျားလေးဆောင်နဲ့ ဆက်နေတယ်။ ဝင်ဝင်ချင်းကို တံခါးက နှစ်ထပ်ရှိတယ်။ သစ်သားတံခါးနဲ့ မှန်တံခါး။ အဝင်ပေါက်ရဲ့ တည့်တည့်မှာ ပြတင်းပေါက်ရှိတယ်။ မှန်ပြတင်းပေါက် .. အမည်းကြီးလေ. သိတယ်ပာုတ်။ အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ ဘယ်လိုမှငိုက်လို့မရဘူး။ ကောင်မလေးက ပထမက သစ်သားတံခါးရော၊ မှန်တံခါးရော နှစ်ခုလုံးပိတ်ပြီး ငိုက်တာလေ။ အဲ့ဒီအချိန်ကျရင် ဆရာမက ပြတင်းပေါက်ကနေ လာချောင်းတတ်တယ်။ ကောင်မလေး တစ်မျိုးစဉ်းစားရပြီပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ ပြတင်းပေါက်ကို ကျောပေး၊ အရှေ့က သစ်သားတံခါးရော၊ မှန်တံခါးရောပိတ်ပြီး ငိုက်လိုက်ရော.. ပဲာပဲာ..။ ငိုက်တာကလည်း ပြတင်းပေါက်ကလာချောင်းရင် ငိုက်မှန်းမသိအောင် လုပ်ရသေးတယ်။ လက်လေးထောက်ပြီးတော့ ခေါင်းလေးကို နည်းနည်းငုံ့လို့ပေါ့။ ခေါင်းကို တည့်တည့်ထားရင်လည်း ကြာရင်သိသွားမှာပေါ့... ပာုတ်တယ်ပာုတ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ငိုက်လို့ကိုမဖြစ်တော့တာ။ စာတွေက မရတာတွေများနေတယ်လေ။ အဲ့ဒီတော့ လက်ဖက်ရည်သောက်ရတော့တာ။ ဆရာဦးထွန်းမြင့်က ညပိုင်းတွေ စာလိုက်သင်တော့ အပြင်ထွက်ဖြစ်တယ်လေ။ အဲ့ဒီတော့ ဆရာ့ကိုပဲ မှာရတယ်။ ကောင်မလေး သူငယ်ချင်းတွေက လက်ဖက်ရည်မသောက်ဘူး။ ကော်ဖီမစ်စ်တွေသောက်တယ်။ Alpine ရေဘူးတွေ သိတယ်ပာုတ်။ အကြီးမပာုတ်ဘူး။ သေးသေးလေးတွေထဲကို တစ်ဝက်လောက် ရေအေးတွေထည့်ပြီးတော့ ကော်ဖီမစ်စ်နှစ်ထုပ် ဖောက်ထည့်ပြီးတော့ သောက်ကြတာ။ အရမ်းကို ရင်တုန်တယ်။ ပထမကတော့ ကောင်မလေးလည်း သောက်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်အခြေအနေဆိုးလာလို့ မသောက်တော့တာ။ တီးမစ်စ်တွေလည်း သောက်ကြတယ်။ ရေဘူးထဲကို ရေတစ်ဝက်ထည့်၊ ကော်ဖီမစ်စ်တစ်ထုပ်နဲ့ တီးမစ်စ်နှစ်ထုပ်ကို ဖျော်ပြီးတော့ သောက်ရတာ။ အိပ်မငိုက်တာထက် လွန်သွားပြီး အိပ်လို့ကိုမရတော့တာ။ ဘယ်လိုမှကို မခံနိုင်ဘူးလေ။ အိပ်လို့မရတော့ အိပ်ရေးပျက်တာပေါ့။ မနက်အစောကြီးကို study ဝင်ရတာဆိုတော့။ ကျောင်းမှာလည်း အိပ်လို့မရဘူး။ အိမ်စာတွေပေးလိုက်လို့ လုပ်နေရသေးတယ်။ အဲ့လိုပေါ့...။
တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ညပိုင်းကို ၃နာရီလောက်ထိ ထိုင်ကြတယ်.။ study ပေါ့လေ။ တကယ်ဆို guide ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့အတင်းကို ထိုင်ပြောကြတာ။ ချယ်ပုလေ.. သိတယ်ပာုတ်။ တကယ်ပါဗျာ.. အဲ့ဒီဆရာမ အကြောင်းဆို ပြောလို့ကိုမကုန်ဘူး။ ပြောစရာတွေမှ တစ်သီတစ်တန်းကြီး။ အဲ့ဒီဆရာမကလည်း ပြန်မသိဘူး မထင်နဲ့နော်.။ အကုန်ပြန်သိ..။ ကောင်မလေးတို့ပြောတဲ့ အချိန်မှာ သူကအပြင်ကနေ နားထောင်နေတာလေ။ ကောင်မလေးတို့ မိန်းကလေးတွေက ဘောင်းဘီဝတ်ခွင့်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် december ဆိုရင် မေမြို့က သိတဲ့အတိုင်းပဲ. အရမ်းအေးတာဆိုတော့ မဝတ်လို့ကလည်း မရပြန်ဘူး။ ကောင်မလေးကလည်း ဘောင်းဘီပဲ အဝတ်များတာဆိုတော့ ဆရာမကို ပြောထားပြီးသား။ သမီးဘောင်းဘီဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ ဆရာမက ဝတ်ခွင့်ပေးတယ်။ ကောင်မလေးတို့က ယောက်ျားလေးဆောင်ကို သွားနေတာမှမပာုတ်တာ။ ယောက်ျားလေးတွေရှေ့ကိုတော့ ဝတ်ခွင့်မရှိဘူး။ ကောင်မလေးဝတ်တော့ ကောင်မလေးရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက လိုက်ဝတ်ကြတာပေါ့။ သူတို့ကတော့ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ဆို အဝေးကြီးပါ။ အဲ့ဒါကို အဲ့ဒီဆရာမကလေ အရမ်းပြောတာ။ တကယ်ဆို ကောင်မလေးကိုပြောချင်တာ။ ကောင်မလေးက ဆရာမရဲ့ permission ရထားတယ်ဆိုတော့ မပြောဘူးလေ။ ကောင်မလေးသူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ သွားပြောတယ်။ နောက်ကျတော့ သူကပါ ဘောင်းဘီလိုက်ဝတ်ရော။ တကယ်ဆို သူက ယောက်ျားလေးခန်းနဲ့ မိန်းကလေးခန်းကို လူးလားခေါက်ပြန် လုပ်နေရတဲ့ guide တစ်ယောက်ပါ။ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ပိုပြီးတော့ အထိအတွေ့ရှိတာပေါ့။ အဲ့ဒါကို ဝတ်တယ်ခင်ဗျာ။ ဆရာမကလည်း ပြောချင်နေတာ ပါးစပ်ကိုယားလို့။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမပြောဘဲ လွှတ်ပေးထားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကောင်မလေးဆီိကို စာလာသင်ရင်တော့ ပြောဖြစ်ကြတယ်.. ချယ်ပုအကြောင်း။ သူကလေ ကောင်မလေးတို့မိန်းကလေးတွေ ဆိုရင် ဘယ်တော့မှကို မကြည်တာ။ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ကျတော့ အဖွဲ့ကိုကျလို့။ guide အချင်းချင်းတောင် သူ့ကိုကြည့်မရတာ ရှိသေးတယ်။ တကယ်ဗျာ.. ပြောရင် မကုန်နိုင်ဘူး။
ကျောင်းတက်ပြီးတော့ တစ်လလောက်နေတော့ ကောင်မလေးတို့အဖွဲ့ ကျောင်းစပြေးကြတယ်။ ပထမကတော့ ကားလေးနဲ့ပေါ့နော်. အရှေ့မှာပြောထားပြီးသားပါ။ နောက်ကျတော့ ကောင်မလေးတို့ ထမင်းစားချိန်က ၁၁း၁၅ နာရီဆိုတော့ ကားစောင့်ရတာ တော်တော်ကြာသွားပြီလေ။ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ မစောင့်နိုင်တာထက် ဈေးလေးနားမှာ သွားစောင့်တယ်ဆိုတော့ ကျောင်းတက်လာတဲ့ ဆရာမတွေနဲ့ တွေ့ရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းချက် ပေးရမလဲမသိဘူးဆိုတော့ ကောင်မလေးတို့ လမ်းလျှောက်ပဲ ပြန်ကြတယ်။ ကျောင်းကနေ ကျောက်တောင်ထိကို လမ်းလျှောက်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့.. ဗြဲ... !_! ။ တစ်ခါတစ်လေ ၇ယောက်လုံး ပြန်ရတာမပာုတ်ဘူး။ ပာိုဖက်က ကောင်တွေက ညှိလို့မရဘူး။ ကိုယ့်ပာာကိုယ် တစ်ယောက်တည်း ပြန်ရတာတောင် ရှိသေးတယ်။ ဆိုးလိုက်တဲ့ဘဝ..။ ထုံးစံအတိုင်း ခွင့်စာလေးမှာ ကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ မေ့လက်မှတ်လေးထိုးလို့ပေါ့.. အပီား.။ နောက်ကျတော့ ဆရာမက ပင်ပန်းမှာစိုးလို့တဲ့ ကျောင်းပြေးမယ့်နေ့ဆို စက်ဘီးတွေ ပေးလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်တစ်ဘီးပေါ့။ လူရှစ်ယောက်ဆိုတော့ ၄စီး။ အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ result တွေ out လို့ ကျတဲ့သူတွေ ကျူရှင်ပြန်တက်နေပြီဆိုတော့ repeater တွေလည်းရှိနေပြီလေ။ အဲ့ဒီတော့ စက်ဘီးငှားရတာ လွယ်တယ်။ အပြန်ကျတော့ ကြုံတဲ့လူနောက်ကို လိုက်စီးရတာပဲ. :( ။ အတန်းပိုင်ကတော့ အမြင်မကြည်တော့ဘူး။ ဘာမှတော့ မပြောပါဘူး။ section-B က အတန်းပိုင်ကလည်း ကောင်မလေးတို့အတန်းလာပြီးတော့ ဆုယဉ်မွန်ရေ. ခဏလာပါဦး ဆိုလို့ ဘာများလဲဆိုပြီး သွားလိုက်ရတာ။ သူ့အတန်းက အောင်မျိုးတင့်၊ ပိာန်းထက်နဲ့ အေကျော်သက်တို့ ခဏခဏကျောင်းပြေးတယ်တဲ့၊ အဲ့ဒါ အဆောင်မှူးကို ပြောပေးပါဆိုလို့ နင်သွားတာပဲ.. :D ။ ကောင်မလေးကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျောင်းပြေးတာကိုး။ ပာုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ အတန်းထဲဝင်မယ် ကြံကာရှိသေးတယ်. section-C က အတန်းပိုင်က သမီးရေ လာပါဦးဆိုလို့ သွားတော့ ဇော်ဇော်အောင်က ကျောင်းပြေးနေတယ်တဲ့၊ အဆောင်မှူးကို ပြောပေးပါဆိုလို့ ကောင်မလေးမှာလေ ရယ်ချင်စိတ်ကို မနည်းမျိုသိပ်ထားရတယ်။ ကောင်မလေးကျောင်းပြေးရင် ဘယ်သူ့ကိုပြောဦးမှာလဲမသိဘူး. :P ။
မှုံမှုံက ကျောင်းပြောင်းသွားတယ်လေ။ အဆောင်နေလိုက်တော့ အ.ထ.က-၁ မှာ သွားနေရတယ်။ ကောင်မလေးနဲ့လည်း အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။ ကျူရှင်က ကောင်မလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်း အဲ့ဒီကျောင်းကဆိုတော့လေ။ အေးမြင့်မြတ်ရယ်၊ ဆုဝေကျော်ရယ်၊ စုမျက်သွယ်ရယ်က စာပန်းအိမ်မှာ အဆောင်နေတော့ ကျောင်းမတက်ရတော့ဘူး။ ကောင်မလေးနဲ့လည်း ဝေးသွားတာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်မလေး ပျော်ပါတယ်။ ပထမကတော့ ၁၀တန်းကြီးကို မြန်မြန်ပြီးချင်တယ်.. အရမ်းပင်ပန်းတယ်လေ။ ကောင်မလေးက အိပ်ရေးအရမ်းမက်တာဆိုတော့ မအိပ်ရရင် လုံးဝမဖြစ်ဘူး။ ကျောင်းမှာပဲ အိပ်နေရတာဆိုတော့ ကောင်မလေးမဖြစ်ဘူး။ တော်တော်သည်းခံရတယ်.. တစ်နှစ်လုံးကို။ အဲ.. အရိုက်ခံရတဲ့ အကြောင်း ပြောရဦးမယ်.. အပဲာ..။ အဲ့ဒီနေ့က စနေနေ့ထင်တယ်။ ကောင်မလေးတို့ အဆောင်ကို အဲ့ဒီသတင်း ဘယ်သူယူလာလဲတောင် မသိဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ ဇန်နဝါရီလကြီး။ ရဲစခန်းရှေ့က တိုက်ကြီးမှာ ကျော်ရဲအောင်နဲ့တင့်တင့်ထွန်း သရဲကားလာရိုက်နေတယ်တဲ့။ ကောင်မလေးတို့ မိန်းကလေးတွေ သွားချင်လိုက်တာလေ.. ဖြစ်ချင်တော့ ထမင်းစားချိန်က ၂နာရီလောက်ကို ပေးတော့ ထမင်းကိုမစားတော့ သွားကြတာ။ ကောင်မလေးက camera ယူထားတယ်ဆိုတော့ အတော်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့။ ပာိုရောက်တော့ တစ်အုပ်စုလုံး ပိာုသွား၊ ဒီသွားနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး ပျော်မြူးနေကြတာ။ သိလား.. ကျူရှင်ကိုတောင် မေ့သွားတယ်။ နောက်တော့မှ ကျူရှင်က guide ဆရာမတစ်ယောက် လာခေါ်မှ ဆရာမကောင်မလေးတို့ကို ရှာနေမှန်းသိတာ။ ကြက်သီးကို ထသွားတာပဲ။ ပြန်တော့ ကောင်မလေးတို့ တစ်ယောက်သုံးချက် ရိုက်ခံရတယ်။ ကောင်မလေးက နောက်ဆုံးပဲ။ နောက်ဆုံးဆိုတော့ ပိုနာတာပေါ့နော်..း( ။ စိတ်ဓာတ်ကို ကျသွားတာပဲ. အဲ့ဒါက ပထမဆုံးအရိုက်ခံရတာ. အပီား..
၁၅မိနစ်ကိုကျတော့ ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကို အတူတူမပေးဘူး။ ဆရာမက ပာိုကိစ္စ၊ ဒီကိစ္စတွေ ကြောက်တယ်လေ။ ကောင်လေးတို့ရဲ့ အရင့်အရင်နှစ်များက အဲ့လိုနားချိန်အတူတူပေးလိုက်လို့ အိမ်သာနားမှာ ချိန်းတွေ့ကြတဲ့ အတွဲတွေ ရှိဖူးတယ်တဲ့။ fresher တွေတော့ မပာုတ်ဘူး။ repeater တွေ။ နော့လေ.. fresher တွေက ရည်းစားရှိခဲ့ရင်တောင် အဲ့လိုလုပ်ရဲပါ့မလား။ သူတို့ repeater တွေပဲ လုပ်တတ်တာ.. :P ။ ကောင်မလေးတို့ guide တွေအကြောင်း အတင်းပြောလိုက်ဦးမယ်။ guide တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့နာမည်တော့ မပြောတော့ပါဘူး။ သူက အရပ်တော်တော်ပုလို့ သူ့ကို ကျောင်းသားတွေက ချယ်ပုလို့ခေါ်တယ်။ သူ့ရှေ့မှာတော့ မခေါ်ရဲဘူးပေါ့ဗျာ။ သူက ယောက်ျားလေးခန်းနဲ့ မိန်းကလေးခန်းကို ကူးချည်သန်းချည် လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ယောက်ျားလေး guide က တစ်ယောက်တည်းရှိတာကိုး။ နေပါဦး.. သူ့အကြောင်း နောက်မှပြောမယ်.. အပီား။ ၁၅မိနစ်လည်း နားပြီးရော မျက်လုံးတွေကျယ်တဲ့သူကကျယ်၊ ပိုငိုက်တဲ့သူက ငိုက်ပေါ့။ မျက်လုံးကျယ်တာက စားသောက်ပြီးလို့ ဗိုက်ပြည့်သွားတဲ့သူတွေ၊ ပိုငိုက်လာတာက ၁၅မိနစ်ကို မရမကအိပ်တဲ့သူတွေ။ ကောင်မလေးက သင်္ချာ၊ အင်္ဂလိပ်နဲ့ Chemistry ကို ဝါသနာပါတော့ အချိန်တိုင်း အဲ့ဒါပဲလုပ်ဖြစ်တယ်။ Physics ဆိုရင် တွက်ရတာကိုပဲ ဝါသနာပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Modern Physics ကို တစ်လုံးမှမသိဘူး။ ရှုပ်နေတာပဲ။ အဲ့ဒီတော့ ကောင်မလေးစာကျက်တဲ့အချိန်ဆို ကောင်မလေး ဝါသနာပါတာတွေပဲ ကျက်တယ်။ ပထမကတော့ ကောင်မလေးက အတန်းထဲကလူတွေနဲ့ အတူတူကျက်ရတာပါ။ တစ်ခန်းထဲမှာပေါ့။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ကောင်မလေးစကားများတာကို ဆရာမက သိသွားတယ်.. :D ။ အဲ့ဒီတော့ ကောင်မလေးကို တစ်ယောက်တည်းကျက်ဖို့ အတန်းပြောင်းပေးတယ်။ ပျင်းစရာကြီးသိလား။ တစ်ယောက်တည်းကျက်ရတာ။ ဆရာမတို့ဖွင့်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာခန်းထဲမှာ..။ တော်တော်ပျင်းဖို့ကောင်းသလို အရင်ကထက်လည်း ငိုက်လာတယ်။ ကျောင်းစစတက်ချင်းတုန်းကတော့ ၁၁း၃၀ နာရီဆို study နားပေးတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အိပ်ပေါ့။ မနက်ကျတော့ ၅း၃၀ နာရီ လာနှိုးတယ်။ ၆နာရီပဲအိပ်ရတယ်.. :( ။ ပထမကတော့ တော်တော်ကိုအားယူပြီး ထရတာ။ နောက်ပိုင်းလည်း အားယူရတာပါပဲ.. အိပ်ရေးမှမဝတာကို။ ကျောင်းသွားနေရလို့သာ တော်တော့တယ်။ ကျောင်းမှာက အိပ်ချိန်ရှိတာကိုး။ အဆောင်မှာသာ တစ်နေကုန်နေရရင်တော့ သေမှာပဲ။ အိပ်ငိုက်လို့လည်းမရ.. ပြီးရင် တစ်နေကုန်စာကျက်နေရတာနဲ့.။
ကျောင်းတက်တက်ချင်းတုန်းကလည်း မင်းသူက အဆောင်မနေသေးဘူး။ ကျောင်းကို စက်ရုံကကားနဲ့ လာတုန်းပဲ။ ကောင်မလေးတို့ကလည်း ကျောင်းမပြေးသေးဘူး။ ကောင်မလေးတို့ ကျောင်းအုပ်က တော်တော်ဆိုးတာ။ အ.လ.က-၃ ရဲ့ကျောင်းအုပ်အဖြစ်ကနေ ကောင်မလေးတို့ အ.ထ.က-၂ ရဲ့ ကျောင်းအုပ်အဖြစ် ပြောင်းလာသူပေါ့။ ပထမကျောင်းအုပ်ကတော့ တော်တော်သဘောကောင်းတယ်။ ပထမကျောင်းအုပ် နာမည်က ဒေါ်မြဆွေတဲ့။ အခုပြောင်းလာတဲ့ ကျောင်းအုပ်က ဒေါ်ညိုညိုလှတဲ့။ ရေရေလည်လည်ကိုဆိုးတာ။ ကျောင်းပျက်ရက်မရှိရဘူးတဲ့။ ကျောင်းပျက်တာနဲ့ စာမေးပွဲဖြေခွင့်မပေးတော့ဘူး.. ဘာညာသာရကာပေါ့ဗျာ။ ကျောင်းတက်တက်ချင်းမို့လို့ ပြောတာလားလို့ ထင်လိုက်မိပါတယ်။ တစ်နှစ်လုံးလည်း အဲ့ဒီစကားက ပါးစပ်ကမချတော့ဘူး။ သူက အဲ့ဒီလိုပြောတော့ ကောင်မလေးတို့အဆောင်ကျောင်းသားတွေ ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဗျာ။ ကောင်မလေးတို့အတန်းထဲမှာ အကြီးဆုံးအဆောင်က စာပေ-၂ နားက နွေစန္ဒာ ဆိုတဲ့အဆောင်။ ကောင်မလေးတို့နဲ့လည်း နီးနီးလေး။ သူတို့လည်း ကျောင်းပြေးဖို့အတွက် လုပ်တာပဲ. မရဘူးဗျာ။ နွေစန္ဒာကသာ တစ်ဆောင်လုံးကျောင်းပြေးရင်တော့ အရမ်းသိသာမှာပဲ.. သူတို့လည်း မပြေးရဲဘူးလေ။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးတို့ကျောင်းက ၉နာရီကျောင်းတက်တယ်လို့သာ ပြောပေမယ့် ၈း၄၅ နာရီမှာ ပထမခေါင်းလောင်းတီးတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ဆို ကျောင်းခန်းထဲ အကုန်လုံးရောက်နေရမှာလေ။ ကောင်မလေးတို့အဆောင်ကတော့ အချိန်မီပို့ပေးပါတယ်။ စက်ရုံကဆိုရင်တော့ မသေချာဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ တော်တော်လေးကိုနောက်ကျတယ်။ တစ်ရက်ကျတော့ ကျောင်းကတက်ပြီးလို့ ၉နာရီတော်တော်ကျော်နေမှ စက်ရုံက ကျောင်းကားကြီးရောက်ချလာတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ဒီနေ့က ဗုဒ္ဓပာူးနေ့. မူလတန်းတွေ assembly စီနေတဲ့အချိန်။ ဆရာမကြီးက မိန့်ခွန်းပြောနေတာပေါ့။ တကယ်လို့သာ သူတို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားရင် ကံကောင်းသွားဦးမယ်။ အခုပာာက တည့်တည့်ကြီးသွားတိုးတော့ တေဘီပေါ့။ မူလတန်းတွေလည်း assembly စီပြီးရော စက်ရုံကလိုက်ပို့တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းတွင်းကို ဝင်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ နောက်တော့ ဆုံးမသြဝါဒတွေ နည်းနည်းမြွက်ကြားတယ်ပေါ့ဗျာ။ နောက်တော့ ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းတယ် သိလား။ ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းတဲ့နေရာက ကျောင်းရဲ့ တကယ့်မိန်းလမ်းမကြီးဆိုတော့ တစ်ကျောင်းလုံး အထင်အရှားကို မြင်နေရတာ။ လူကလည်း နည်းနည်းများတော့ ကြည့်လို့တောင်ကောင်းနေသလိုပဲ.. :D ။ နောက်ကျတော့မှ အကုန်လုံးကို ဆိုင်ရာအတန်းတွေထဲ ဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ မင်းသူကြီး အတန်းထဲဝင်လာတာ မျက်နှာကြီးကို နီရဲနေတာပဲ။ ပထမတော့ ကောင်မလေးလည်း မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ မင်းသူဘာဖြစ်လာပါလိမ့်ပေါ့.. နောက်ကျမှ ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းက စက်ရုံကကျောင်းသားအဖွဲ့ပဲဆိုပြီး စဉ်းစားမိမှ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ရယ်ရတယ်။ သူကတော့ တော်တော်ရှက်နေပုံပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကောင်မလေးတို့ အတန်းထဲမှာ သူကျိတ်ပိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတာကိုး.. :P ။
၁၀တန်းရောက်လာတော့ အရင်တုန်းကလို ကျောင်းကကိစ္စတွေမှာ ဝင်ပါလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ အချိန်ပုပ်ကုန်မှာစိုးလို့။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးတို့ ၁၀တန်းဆိုရင်လည်း ကျောင်းကိစ္စတွေမှာ သိပ်မလုပ်ခိုင်းပါဘူး။ စာတွေများတယ်ဆိုတာ သိတယ်လေ။ အဲ့ဒီတော့ အိပ်ချိန်လည်း ပိုရတာပေါ့။ ၁၀တန်းမှာ ကောင်မလေးတို့အရေးကြီးဆုံး လိုအပ်တာက ဘာလဲသိလား.။ မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်တယ်လေ။ ..... ခွင့်ကဒ်ပေါ့ဗျာ။ ကောင်မလေးဆို ၃ခုဝယ်ထားတယ်။ ကျောင်းပြေးလို့ရအောင်။ အပီား.. ပထမကျောင်းတက်တက်ချင်းကတော့ ကျောင်းမပြေးပါဘူး။ ဆရာမကြီးပြောထားတာတွေလည်း ရှိနေတာကိုး။ ကိုယ့်ဖက်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ကတော့ မေ့လက်မှတ်ကို အတုထိုးတာ ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခြင်းပါပဲ။ နောက်ဆို ကျောင်းပြေးရတော့မယ်လေ။ ကျောင်းတက်တာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ ကျောင်းပြေးတာကို လေ့ကျင့်ကြတယ်။ ပထမကတော့ ဈေးလေးနားမှာ စက်ရုံက ၁း၃၀ နာရီထွက်မယ့်ကားရှိတယ်။ နေ့တစ်ပိုင်းကျောင်းပြေးပြီးတော့ အဲ့ဒီကားနဲ့ပဲ လိုက်ကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျောက်တောင်မှာဆင်းပြီး အဆောင်ကိုလမ်းလျှောက်ပေါ့။ ပထမတော့ ဒီလိုပဲ။ ကောင်မလေးတို့အရင်တစ်နှစ်က ၁၀တန်း result တွေ မထွက်သေးတော့ repeater တွေလည်းမရှိဘူးပေါ့။ ကျောင်းပြေးလာတဲ့ fresher တွေကလည်း နည်းတော့ စာသင်ဖို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ စာကျက်ရတာပေါ့။ သူတို့တွေကသာ စာသင်ဖို့မဖြစ်တာ။ ကောင်မလေးပြန်လာရင် စာသင်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ. :( ။ သင်လိုက်ရတဲ့စာကလည်း ခေါင်းကိုခြောက်နေတာပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ဆရာမကစာသင်ဖို့လာနေရင် စာကျက်နေလိုက်တယ်။ ဆရာမလည်းလာရော ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုရင် ပာိုပာာကျက်၊ ဒီပာာကျက်ပေါ့။ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့စာတွေဆိုရင်တော့ ဆရာမကသိပါတယ်။ စာမသင်တော့ဘူး ကျက်ပဲကျက်ခိုင်းလိုက်တော့တယ်။ ဒါပေမယ့်နော်.. ခဏခဏလာလာ check တယ်။ အိပ်ငိုက်နေလား.. တောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးနေလား.။ အဲ့လိုပေါ့.။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ပာိုတွေးဒီတွေး အရမ်းတွေးချင်တယ်။ ဆရာမမြင်သွားရင်လည်း ဆူနေဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ တစ်ခုခုကို တွက်နေလိုက်တယ်။ အဲ့ဒါမှ ball pen လည်းကိုင်ထားတယ်၊ စာအုပ်ကိုလည်းကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ စာကြည့်တယ် ထင်သွားမှာကိုး။ ဘဝနော်.. ဆိုးလိုက်တာ။ အရမ်းအထီးကျန်တယ်လို့ ခံစားရရင် အတန်းထဲမှာ ခဏတဖြုတ် ဝင်ကျက်လိုက်တယ်။ နေ့လည်ပိုင်းဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးဆောင်နောက်က ထောပတ်ပင်အောက်၊ အုတ်ခုံတွေပေါ်မှာ လင်းလင်းဦးတို့နဲ့ စာကျက်ရင်း စကားသွားပြော။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက လင်းလင်းဦး၊ စောသန္တာအေး၊ မေချိုမောင်နဲ့ တမ်ထန်းတို့က ကျောင်းမတက်ရဘူး။ လင်းလင်းဦးကလွဲရင် ကျန်တဲ့သုံးယောက်က သုံးတောင်ကနေ လာတက်ရတာ။ မေမြို့မှာ နေဖူးတဲ့သူတွေ သိမယ်ထင်တယ်။ ပြင်စာနားက သုံးတောင်ရွာလေ။ သူတို့ကျတော့ အရမ်းဝေးတော့ သူတို့မိဘတွေက သိပ်မလာဘူး။ တမ်ထန်းကျတော့ နည်းနည်းချို့တဲ့တယ်။ သူ့အဖေက မူလတန်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး.. ချင်းလူမျိုးလေ။
ကျောင်းပြေးပြီး ပြန်လာရင်တော့ သူတို့နဲ့ စကားပြောလိုက်၊ စာကျက်လိုက်လုပ်ပြီးတာနဲ့ ခဏအိပ်ရတယ်။ သူတို့ကတော့ အိပ်လို့ကောင်းတာပေါ့။ ကောင်မလေးကျတော့ အိပ်လို့မကောင်းတော့ဘူး။ ဆရာဦးအောင်ကျော်လာမှာလေ။ ခဏပဲအိပ်ပြီး အောက်ဆင်းခဲ့ရတာ။ ပုံမှန်ကတော့ နေ့တိုင်း အဲ့ဒီလိုပါပဲ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေကျတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်တည်း သိပ်မသင်ရတော့ဘူး။ အပြင်ဆရာတွေ မလာဘူးလေ။ အဆောင်က ဆရာနဲ့ ဆရာမပဲသင်တာဆိုတော့။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးဝင်သွားပြီးလို့ အတန်းထဲကိုသင်လိုက်တဲ့စာက ကောင်မလေးသင်ပြီးသားစာတွေဆိုတော့ စိတ်လည်းမဝင်စားတော့တာနဲ့ အိပ်ငိုက်ရော။ ကောင်မလေးက နောက်ဆုံးမှာထိုင်ပေမယ့် အခန်းဖွဲ့ထားတဲ့ပုံက အခန်းရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကို တစ်ဆင့်မြှင့်ထားတာဆိုတော့ ကောင်မလေးက အမြင့်မှာရောက်နေသလိုဖြစ်ပြီးတော့ ကောင်မလေးကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီးကို မြင်ရတာပေါ့. :( ။ ထမင်းစား ခဏနားပြီးတော့ အတန်းပြန်တက်ရင်ကျတော့ ကောင်မလေးကို အတန်းထဲမဝင်ခိုင်းတော့ဘူး။ essay သင်မယ့်ဆရာရောက်နေတာကိုး။ အဲ့ဒီဆရာနာမည်က ဆရာဦးမောင်မောင်သွင်။ ကောင်မလေးကိုကျတော့ grammar သင်တဲ့ဆရာမ ဒေါ်နေဝင်းသန်းက သင်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ကောင်မလေး grammar တော်တော်ကောင်းတယ်. (ကြုံတုန်းကြွားခြင်း :P ) ။ perfect တော့ မပာုတ်ပါဘူး။ ၁၀တန်းတုန်းက တော်တော်ကိုကောင်းခဲ့တယ်လို့ ပြောတာ။ ၁နာရီလည်း ခွဲရော အတန်းလည်းဆင်းရော။ သူများတွေကတော့ အိပ်ကြပေါ့။ ကောင်မလေးကျတော့ ဘာလုပ်လဲသိလား။ ဆရာဦးအောင်ကျော်ကို စောင့်နေရတယ်.. ဗြဲ......။ အဲ့ဒီအချိန် သူများတွေလည်းအိပ်တော့ ကောင်မလေးလည်း အိပ်ချင်တာပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ ရေရေလည်လည်ကို သမ်းတာပဲ။ ဆရာကလည်း သိသလားမမေးနဲ့။ စကားလမ်းကြောင်းတွေပြောင်းပေး၊ စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပေးနဲ့။ တော်တော်တော်တဲ့ဆရာပါ။ တပည့်ကသာ တော်တော်ဖျင်းနေတာ. :( ။ ဆရာက ၂း၃၀ နာရီမှ ပြန်တယ်။ ၄နာရီကို study စဝင်ရမှာဆိုတော့ ၁နာရီခွဲပဲအိပ်ရတော့မှာပေါ့. ပွာန်းးးးးးးး ။ အပေါ်ကိုလည်းတက်လိုက်ရော ပိာုဘွားတော်တွေ အိပ်လိုက်ကြတာများ စိတ်ကိုချမ်းသာလို့။ ကောင်မလေးလည်း ဝင်အိပ်တယ်။ ၄နာရီထိုးတော့ မျက်နှာသစ်၊ စာအုပ်တွေယူပြီးတော့ အောက်ဆင်း၊ စာကျက်ပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေတော့ ရေချိုးရတယ်။ ဒီလိုအချိန်ုဆိုရင်တော့ ကောင်မလေးက အတန်းထဲကလူတွေနဲ့ ပေါင်းကျက်တတ်တယ်။ လင်းလင်းချင်းချင်းလည်းရှိတော့ မိန်းကလေးဆောင်နောက်မှာ ကိုယ့်အဖွဲ့နဲ့ကိုယ် စကားပြော၊ စာကျက်၊ လုပ်ကြတာပေါ့။ ကောင်မလေးလည်း ဝင်ရောလိုက်တယ်။ ပျော်စရာကောင်းတာကိုး။ ဒါပေမယ့် fresher တွေချည်းပဲဆိုတော့ သိပ်ပျော်စရာမကောင်းဘူး။ ၆နာရီ study ခဏနားတော့ ထမင်းစား၊ ၆နာရီခွဲပြန်ဝင်ရတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ ကောင်မလေးကိုလုပ်ပေးထားတဲ့ ကွန်ပျူတာခန်းထဲမှာ သွားကျက်ရတယ်။ ကွန်ပျူတာခန်းအကြောင်း ပြောပြရဦးမယ်........ ။
ကျောင်းဆင်းတော့ မငိုက်တော့ဘူးဗျာ။ ကျောင်းပေါက်ကို မြန်မြန်ရောက်အောင် ပြေးရတာလည်း အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်နေတာ။ ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ အဆောင်ကို ပြန်ရောက်မှာလည်း တော်တော်ကြောက်ရတယ်။ အဆောင်ရောက်တာနဲ့ စာသင်ရမှာကိုး။ ကောင်မလေးက မနားရဘူး. သိလား။ အတန်းကလူတွေကတော့ နားရတယ်.. ကောင်မလေးသင်ပြီးမှ သူတို့ကသင်ရမှာကိုး။ ကျောင်းကနေပြန်ရောက်ရောက်ချင်း Physics ဆရာက ကောင်မလေးကိုစောင့်ကြိုလို့။ ဆရာ့နာမည်က ဦးအောင်ကျော်တဲ့။ အသားဖြူဖြူနဲ့ တော်တော်ချောတယ်။ လူပျိုကြီး.. ကြုံတုန်း ကြော်ငြာပေးတာပါ. :D ။ ကောင်မလေးလည်း ရောက်သွားရော ဆရာကစာစသင်တော့တာပဲ။ တော်သေးတယ်.. ဆရာက စာမမေးတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်ခန်းစာတစ်ခုပြီးတာနဲ့ သင်ထားတဲ့ Definitions တွေရော၊ ပုစ္ဆာတွေရော အကုန်အလွတ် ပြန်ရေးခိုင်းတာ။ အဲ့ဒီနေ့ဆို ကောင်မလေး အချိန်ဆွဲထားတတ်တယ်.။ ဆရာက ဒီနေ့မပြီးရင် နောက်နေ့ပါ စာမသင်ဘဲ ပြန်ရေးခိုင်းတာဆိုတော့ ရတာလေးတွေကို လက်လှမ်းမီသလောက်ပဲ ရေးလိုက်တယ်။ မရတာတွေ နောက်နေ့ပြန်ရေးရအောင်ဆိုပြီး ချန်ထားတာ. :P။ ပျော်စရာကြီး.. ဆရာကလည်း သိတယ်သိလား။ မရမှန်းလည်းသိရော. နောက်နေ့မှထပ်ရေးတဲ့။ ဒီနေ့ရေးတာတွေကလည်းးအမှားတွေများတော့ မှားတာတွေကို နောက်တစ်နေ့ပြန်ရေးရသေးတယ်. :( ။ အတန်းထဲကလူတွေကတော့ အေးဆေးပဲပေါ့.. ပွာန်း.. လူများတော့ ဖောရှောလုပ်လို့ရသေးတယ်။ ကောင်မလေးမှာသာ တစ်ယောက်တည်း.. ဗြဲ........ ။ နောက်ပြီးတော့ ကျောင်းကနေ အိပ်ငိုက်လာတဲ့အရှိန်ကလည်း မသေသေးတော့ ဆရာဦးအောင်ကျော်အချိန်ဆို အပြတ်ငိုက်တာပဲ။ ဆရာနဲ့ကောင်မလေးနဲ့က ကြားမှာ စာရေးစားပွဲပဲခြားတာကိုး။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးဖက်ကို အလင်းရောင်က ပိုရောက်တော့ ကောင်မလေးဘာလုပ်လုပ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကို မြင်ရတာ။ ကောင်မလေး ငိုက်နေလည်း ဆရာက သိတာပဲ။ ဒါပေမယ့် မဆူဘူးဗျ။ ကောင်မလေးကို ပြောပြတယ်။ ညကျရင် ထမင်းသိပ်မစားနဲ့တဲ့။ night study မှာ အိပ်ငိုက်လိမ့်မယ်တဲ့။ တကယ်ဆို ကောင်မလေး အခုငိုက်နေတာကို ပြောချင်တာ. :P ။ ဒါပေမယ့် ပြောပါဘူး။ ညကိစ္စကိုပဲ ပြောတယ်။ အဲ.. အဲ့ဒီမှာ ကောင်မလေး မျက်လုံးနည်းနည်းကျယ်လာပြီ။ ညထမင်းများများစားတာနဲ့ အိပ်ငိုက်တာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့။ ကောင်မလေးကလည်း အငြင်းကသန်သန်၊ ဆရာကလည်း အငြင်းကသန်သန်ဆိုတော့ တိုက်ပွဲတွေကောင်းလာပြီးတော့ အလွတ်ရေးတာတွေ မပြီးသေးခင် အချိန်ကုန်သွားရော. :P ။ ပိုင်တယ်နော်.. ငှဲငှဲ..။
ကောင်မလေးအချိန်လည်းပြီးရော ဆရာက အတန်းဖက်ကို ဝင်သွားတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆရာမရဲ့အမျိုးသားက ဝင်လာရော။ ဆရာ့နာမည်က ဒေါက်တာထွန်းမြင့်။ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်။ ကောင်မလေးကို အင်္ဂလိပ်ရယ်၊ Chemistry ရယ်၊ Bio ရယ် သင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ကတော့ တော်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာဖြစ်လို့ လုံးဝအိပ်မငိုက်ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ Chemistry သင်ရင်လည်း အတွက်အချက်ကို ဝါသနာပါလို့ အိပ်မငိုက်ပြန်ဘူး။ များသောအားဖြင့်ပြောပါတယ်။ Bio သင်ရင်တော့ မရတော့ဘူးဆရာ။ တစ်စက်မှကို စိတ်မဝင်စားတဲ့ဘာသာလည်းဖြစ်၊ စာလုံးတွေကလည်း ခက်ဆိုတော့ ငိုက်လာတာပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ အရမ်းအိပ်ရေးဝနေရင်တောင် ပျင်းပျင်းနဲ့ စာဆက်မသင်နိုင်အောင် ပာိုလျှောက်မေး၊ ဒီလျှောက်မေး.. ဆရာကလည်း အိပ်ရေးအရမ်းပျက်တယ်။သူ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်က ကိစ္စ၊ ပြီးတော့ အဆောင်တွေမှာလည်း လိုက်သင်သေးတော့ အစောကြီးထရတယ်၊ ညကျတော့လည်း တော်တော်နဲ့ အိပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ ငိုက်ပြီပေါ့။ အဲ့ဒီ Bio သင်တဲ့နေ့ဆို ဆရာရော တပည့်ရော ပြိုင်ပြီးတော့ ငိုက်နေလိုက်တာ.. ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ.. :P ။ ကောင်မလေးကို ဆရာဦးထွန်းမြင့် သင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ပာိုဖက်အတန်းမှာလည်း ဆရာဦးအောင်ကျော်က သင်ပြီးသွားပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ ကောင်မလေးလည်း အတန်းကူးတော့တယ်။ ထွက်ရလွယ်အောင် နောက်ဆုံးအတန်းမှာပဲ တစ်ယောက်တည်းထိုင်လိုက်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဆရာမက ဝင်တယ်။ သင်္ချာပေါ့။ ဆရာမစာသင်ရင် အရမ်းရယ်ရတယ်သိလား။ ဘယ်လိုပြန်ပြောပြရမလဲ မသိဘူး။ ပြန်မပြောတတ်ဘူး။ သင်္ချာချိန်ဆို ငိုက်တဲ့သူသိပ်မရှိဘူး။ ကောင်မလေးက လွဲရင်ပေါ့။ ကောင်မလေးက အတန်းထဲမှာသင်ရရင် မငိုက်ပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းသင်ရမှသာ တော်တော်ငိုက်တာ။ တစ်ခါတစ်လေ ရှောင်နေတယ်လေ. ဆရာမကို.. အပီား။
ဆရာဦးအောင်ကျော်အကြောင်း ပြောပြရဦးမယ်။ ဆရာကလေ သူ့အချိန်မှာ အိပ်ငိုက်မှာ အရမ်းကြောက်တာသိလား။ အဲ့ဒီတော့ အတန်းထဲကို ဝင်သွားပြီဆိုကတည်းက "အားလုံး မင်္ဂလာပါ" ဆိုတာကြီးကို လိပ်ခေါင်းထွက်မတတ်အော်တာ. :( ။ သူကတော့ စေတနာနဲ့ပါ။ ကျောင်းသားတွေ အိပ်ငိုက်မှာစိုးလို့။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျောင်းသားတွေကလည်း သူ့အသံကို နားယဉ်နေပြီဆိုတော့ လုံးဝကို မလန့်တော့ဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း ငိုက်လျှက်ပဲ။ စာသင်ရင်လည်း အော်သင်တာ။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်တန်းလုံးနီးပါး ငိုက်နေတဲ့အချိန် သူကပုံတစ်ပုံကို လေဘယ်လ်ကအစသင်နေတဲ့ အချိန်ဆို "ဒါဘာလဲပော့" ဆိုရင် အသံမထွက်တော့ဘူးလေ။ အပီား.. အဲ့ဒီအချိန်မှာ အနောက်လှည့်ကြည့်တော့ ကျောင်းသားတော်တော်များများ ငိုက်နေပြီကိုး။ ကျောက်သင်ပုန်းကိုထု၊ ရင်ခေါင်းသံကြီးနဲ့ "ဒါဘာလဲပော့" ဆိုမှပဲ ကျောင်းသားတွေ ပြူးပြဲကြည့်ရတော့တယ်။ ပီားပီား.. တကယ်ကိုရယ်ရတယ်။ သင်လည်းသင်ပြီးရော "အားလုံးမင်္ဂလာပါ" ဆိုပြီးတော့ ထွက်သွားရော။ တစ်ခါတစ်ခါများ အတန်းထဲကယောက်ျားလေးတွေ စချင်ရင် ကျောင်းသားတွေအပြင်ကို တစ်ယောက်မှဂရုမပြုမိချိန်ဆို ဇော်ဇော်အောင်တို့၊ အောင်မျိုးတင့်တို့ အခန်းတံခါးကို ရုတ်တရက်ဖွင့်၊ ပြီးတော့ ဆရာဦးအောင်ကျော်လေသံလိုမျိုး အသံအကြီးကြီးနဲ့ "အားလုံးမင်္ဂလာပါ" လုပ်တော့ အကုန်လုံးက လန့်ဖျတ်ပြီး ထရတာပေါ့။ နောက်မှ ကြည့်လိုက်တော့ ဇော်ဇော်အောင်တို့ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ တစ်ခန်းလုံးဝိုင်းပြီးတော့ မေတ္တာပို့လိုက်ကြတာ ရစရာကိုမရှိဘူး။ :P ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆရာလည်း အော်တာအကျင့်ပါသွားလို့ထင်ပါတယ်။ ကောင်မလေးနဲ့စာသင်တုန်း တစ်ခါရယ်ရသေးတယ်။ ကောင်မလေးက ဆရာလာလာချင်းဆို ဆရာ့ကိုသွားကြိုပြီး "မင်္ဂလာပါဆရာ"လို့ နှုတ်ဆက်တာကိုး။ တစ်ခါတစ်လေ ဆရာလာတာမသိလို့ အခန်းထဲမှာ စာလုပ်နေတုန်း ဆရာရောက်လာပြီဆို ဆရာက "သမီးမင်္ဂလာပါ" လို့နှုတ်ဆက်တတ်တယ်။ အဲ့ဒီနေ့က ဆရာလာတာ လုံးဝမသိဘူး။ အခန်းထဲမှာ စာလုပ်နေတာ။ ဆရာက မောကြီးပန်းကြီးဝင်လာပြီးကို ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီး အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ "အားလုံးမင်္ဂလာပါ" တဲ့။ ကောင်မလေးလည်း ကြောင်သွားတာပေါ့။ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘဲ ဆရာ့ကိုပဲ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ကြည့်နေမှ ဆရာသတိရသွားတယ်ထင်တယ်။ ရှက်လည်းရှက်သွားတယ်ထင်ပါ့။ "အော်.. အားလုံးကလည်း တစ်ယောက်တည်းပဲရှိတာကိုး" တဲ့။ ပိာပိာ.. ကောင်မလေးမှာလေ တစ်ချိန်လုံး ရယ်ချင်တဲ့စိတ်ကို ထိန်းထားရတာ။ ဆရာ့အချိန်ပြီးမှပဲ ရယ်ရဲတော့တယ်။ လင်းလင်းဦးတို့ကို ပြန်ပြောပြတော့လည်း ရယ်လိုက်တာ.. လင်းလင်းဦးက အရယ်သမားလေ။ အတောကိုမသတ်တော့ဘူး ရယ်တာများ။ ပီားပီား.. အခုပြန်စဉ်းစားရင်တောင် ရယ်ရတယ်။
ပြန်ဆက်ဦးမယ်။ အဲ့ဒါ သင်္ချာချိန်လည်းပြီးရော ကျူရှင်ဆင်းတယ်။ နောက်တော့ ညနေစာစား၊ ပန်းကန်ဆေး ဘာညာသာရကာလုပ်ပေါ့ဗျာ။ တစ်ခါတစ်လေ ရေချိုးရတယ်။ ကျောက်တောင်ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း ရေကလည်း အရှားသားဗျ။ မေမြို့မှာနေဖူးတဲ့သူတွေ သိပါတယ်ဗျာ။ တော်သေးတယ်. အဆောင်က အဝီစိတွင်း တူးပေးထားလို့။ အဲ့ဒါတောင် တစ်ခါတစ်ခါ မီးမလာတဲ့အချိန်များဆို မျက်နှာသစ်စရာတောင် ရေမရှိတဲ့ဘဝ။ အေကျော်သက်ဆို ညနေတိုင်း ခြေထောက်ဆေးနေကျ။ သူက အသန့်အရမ်းကြိုက်တာလေ။ တကယ်လို့ ခြေထောက်ဆေးစရာ ရေမရှိရင် စက်ရုံကိုပြန်ပြီးတော့ ပြန်ဆေးတယ်တဲ့ဗျာ။ ကဲ.. ဘယ်လောက်များလဲလို့။ စက်ရုံဆိုတာ ကျူရှင်ကနေ ကားနဲ့သွားရင်တောင် နာရီဝက်စီးရတာကို။ ဆရာမက အဲ့ဒါလေးတော့ တော်တော်အမြင်ကတ်တယ်။ အဲ.. ဘယ်တွေရောက်ကုန်ပြီလဲမသိဘူး။ အော်.. ပန်းကန်ဆေးပြီးသွားပြီ.. :D ။ နောက်တော့ အင်္ကျီလဲ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေါ့။ ခဏနားပြီးတာနဲ့ ၇နာရီလောက်ဆို night study စဝင်ရတာ။ စဝင်တာနဲ့ ကောင်မလေးတို့ မိန်းကလေးဆောင်မှာ အသံတွေစကြားရတော့တာပဲ။ စာကျက်သံမပာုတ်ဘူး.. ပာိုအကြောင်း၊ ဒီအကြောင်း ပြောတဲ့အသံ။ ကောင်မလေးတို့ အတန်းကို guide ၄ယောက်ထားပေးတယ်။ ဆရာမတွေက နောက်ကနေစောင့်ပေါ့။ ဆရာမတွေကလည်း သူတို့ပာာသူတို့ စကားပြောတယ်။ ကောင်မလေးတို့ကလည်း ကိုယ့်ပာာကိုယ်ပွားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ရိုးရိုးတန်းတန်းမပွားဘူး။ လင်းလင်းဦးက ကောင်မလေးကို စာလာမေးတယ်။ ကောင်မလေးက ပြန်ရှင်းပြတယ်။ ရှင်းပြရင်းနဲ့ ပာိုအကြောင်း၊ ဒီအကြောင်းလေးပြောပေါ့။ ဆရာမတွေကတော့ မသိပါဘူး။ ပာိုစာလုံးကို လက်ညှိုးထိုးပြသလို၊ ဒီပုစ္ဆာကို လက်ညှိုးထိုးပြသလိုနဲ့ ပြောတာလေ.. kwi kwi. :P ။ ငိုက်တာက ခပ်များများပဲ။ ည ၉နာရီကျော်လာရင် စငိုက်လာပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ အပြင်ခဏထွက်၊ ပာိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ မျက်လုံးနည်းနည်းကျယ်လာရင် ပြန်ဝင်ပေါ့။ ၉း၄၅ နာရီလောက်ဆို ခဏနားပေးတယ်။ ၁၅မိနစ်ပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်ပဲ.. ကောင်မလေးတို့ အိပ်ကြတာ။ ၁၅မိနစ်တည်းကို ရအောင် အိပ်ကြတယ်သိလား။ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့ အိပ်လိုက်ကြတာ။ တချို့တွေကတော့ ခေါက်ဆွဲတွေဘာတွေဖျော်စားပေါ့။ ရေနွေးက မပူလို့ ဒီအတိုင်းကိုက်စားရတာတောင်ရှိသေးတယ်. စိတ်ပိန်ပါ့။ ဆရာမကတော့ ယောက်ျားလေးခန်းထဲဝင်ကြည့်လိုက်၊ မိန်းကလေးခန်းထဲ ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့..။ ဆရာမလာရင်တော့ အကုန်လုံးကသိကြတယ်။ ပာိုပာာလုပ်သလို၊ ဒီပာာလုပ်သလိုနဲ့.. တစ်ခါတစ်လေများ ကောင်မလေးနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာ မိရင်တော့များလား.. ပာင်းပာင်း.. ကောင်မလေးတို့က စကားလမ်းကြောင်း လွှဲလိုက်တာပေါ့လို့.. :P ။ ကျောင်းကသူငယ်ချင်း အကြောင်းကနေ ပာိုပုစ္ဆာက ပာိုနေရာမှာ ပာိုလိုဖြစ်နေတာ နင်နားလည်လား.. နားလည်ရင် ငါ့ကိုအဲ့ဒီစာအုပ်လေး ခဏပြပါဦးပာာ. တွက်ပုံတွက်နည်း ၃မျိုးလောက် လိုချင်လို့.. ဘာညာသရကာ နေကြာကွာစိပေါ့. အပီား.. ငါ့ကိုရှင်းပြပါဦးဆိုတာတော့ သွားမလုပ်ရဲဘူး။ ရှင်းပြပါဦးပြောမှ ဆရာမကဝင်ရှင်းပြနေရင် အိပ်ငိုက်နေဦးမှာ. အပီား. :D ။ သြော်.. ကောင်မလေးတို့ အဆောင်မှုး နာမည်က ဒေါ်ခင်မာဦးတဲ့။ သင်္ချာ စပယ်ရှယ်လစ်စ်ပေါ့.. =)
၉တန်းတုန်းကလည်း ကျောင်းပြေးရင်း စာသင်ရင်းနဲ့ တစ်နှစ်ကုန်လာရော ဆိုပါတော့။ ကောင်မလေးတို့ သူငယ်ချင်းတွေက ကျူရှင်မှာ ပိုပျော်တယ်။ ၁၀တန်းဆိုတော့ အိမ်က အဆောင်ထားမယ်တဲ့။ ပထမက "စာပန်းအိမ်" မှာနေမယ်ပေါ့ဗျာ။ မေနဲ့က အဲ့ဒီလိုစီစဉ်ထားတာ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကောင်မလေးက ဖေ့ကိုပြန်လာခိုင်းလိုက်တာ။ ၁၀တန်းတစ်နှစ်လုံး ဖေပြန်လာလည်းတွေ့ရမှာမပာုတ်ဘူး ဆိုပြီးတော့ ပြန်လာခိုင်းရော။ ဖေကလည်း ပြန်လာတယ်။ ပြန်လာပြီးတော့ အဆောင်သွားအပ်မယ်ဆိုပြီး ၉တန်းတုန်းက နေတဲ့ အဆောင်ကိုဝင်နှုတ်ဆက်တယ်။ နောက်မှ အပ်မယ့်အဆောင်ကို သွားမယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတော့ ၉တန်းတုန်းကနေတဲ့ အဆောင်က ကောင်မလေးကို တောင်းတယ်။ အဲ.. တောင်းတယ်ဆိုတာက ၁၀တန်းကို ဘာသာစုံရဂုဏ်ထူးထွက်အောင် သင်ပေးမယ့်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒါ သူတို့ဆီမှာ အဆောင်ထားပါဆိုတော့ ဖေကလည်း ထားလိုက်ရော။ အဲ့ဒါနဲ့ ဟိုအဆောင်ကို cancel လုပ်လိုက်တယ်။ ပထမ တစ်လကတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ကျူရှင်တက်နေတာပေါ့။ ကောင်မလေးက အတန်းထဲမှာ စာသင်ရတာမပာုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်တည်း သင်ရတာ။ ပျင်းလိုက်တာ ပြောမနေနဲ့။ ညက ကောင်းကောင်းမအိပ်ရတော့ အိပ်လည်း အိပ်ငိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းသင်တာဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ် ခိုးအိပ်လို့ရမလဲ။ စိတ်ကိုပျက်ရော။ မနက်ကို ၆နာရီလာပြီးတော့ ညနေကို ၅နာရီမှပြန်ရတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က ဖယ်ရီကားတွေမရှိတော့ဘူး။ ဖေကပဲ ဆိုင်ကယ်နဲ့လာကြိုတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့ ၁၀တန်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေနိုင်ရင် Singapore ခေါ်မယ်တဲ့။ အလည်ပေါ့။ အဲ.. အဲ့ဒီမှာ တော်တော်အားတက်သွားတယ်။ ငါကြိုးစားလိုက်မယ်ပေါ့.. အဟီး။
နောက်ကျတော့ လင်းလင်းဦးနဲ့ နှစ်ယောက် အဆောင်နေလိုက်တယ်။ မိန်းကလေးက ကောင်မလေးနဲ့ လင်းလင်းဦး နှစ်ယောက်တည်းပဲ။ ယောက်ျားလေးကျတော့ ဇော်ဇော်အောင်၊ ဖြိုးဝေထွန်း၊ မင်းပိုင်တိုး၊ ပိာန်းထက်၊ အေကျော်သက်၊ အောင်မျိုးတင့်။ ည night study ကျတော့ မရတော့ဘူး။ တော်တော်အိပ်ငိုက်တာ။ မနက် study လည်းမရဘူး။ အိပ်ငိုက်တာပဲ။ ကျောင်းကလည်း တက်ရသေးတယ်လေ။ မနက်ကျတော့ ၆း၃၀ နာရီမှာ အတန်းဝင်ရတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က အတန်းထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ချိန်။ ကောင်မလေးက မြန်မာစာဆရာကို စောင့်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း အခန်းထဲမှာ ဝင်သင်လိုက်တယ်။ ဆရာလာမှ အပြင်ထွက်တယ်။ ဆရာလည်းလာရော ပထမကတော့ ရှိန်တာပေါ့။ တစ်ခါမှမှ မမြင်ဖူးတာကို။ နောက်ကျတော့ ဆရာနဲ့အဖွဲ့ကျသွားရော။ မြန်မာစာဆရာက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာ။ ကွမ်းလေးတမြုံ့မြုံ့နဲ့ စာတွေကိုရှင်းပြတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ကဗျာသင်ရင်းနဲ့ ရှေးခေတ်ကအကြောင်းတွေရော ပြန်ပြောပြတတ်တယ်။ ဗဟုသုတရတာပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေဆို ဘာစာမှမသင်လိုက်ရဘဲ စကားပြောရင်းနဲ့ အချိန်ကုန်သွားတာလည်း ရှိသေးတယ်။ ပျော်စရာကြီး.. :P ။ ဆရာ့ကျေးဇူးတွေကလည်း အများကြီးပါ။ ကောင်မလေး မြန်မာစာရေးထုံး မှန်လာတာလည်း ဆရာ့ကြောင့်ပဲ။ သဒ္ဒါအမှားနည်းသွားတာလည်း ဆရာ့ကြောင့်ပါ။ ဆရာကပြောဖူးတယ်။ လက်ရေးမလှချင်နေ.. ရေးထုံးမှန်ပြီးတော့ သပ်ရပ်နေရင် ဂုဏ်ထူးမလွဲဘူး တဲ့။ အားရှိစရာကြီး။
ကောင်မလေးကိုလည်း သင်ပေးပြီးရော ဆရာက အတန်းထဲကိုဝင်တယ်။ ကောင်မလေးက အားပြီပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆရာမက ကောင်မလေးကို သင်္ချာ ဒါမှမပာုတ် ရူပဗေဒ လာသင်ပေးရမှာ။ အဲ့ဒါကို ကောင်မလေးက မသင်ချင်တော့ ဆရာမနဲ့မတွေ့အောင် ရှောင်နေလိုက်တယ်။ :P တစ်ခါတစ်လေများ မနက်စာစားရင်းနဲ့ စာကြည့်သလိုလိုလုပ်ပြီးတော့ မနက်စာကိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့ စားလိုက်ရော.. အပီား။ ပြီးတော့ စာသင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှ အတန်းထဲကလူတွေက ကျောင်းဆင်း၊ မနက်စာသွားစားကြတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ ကောင်မလေးက free။ စားသောက်ပြီးတာနဲ့ ကောင်မလေးတို့ ကျောင်းသွားရတယ်။ အခုများ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင် လွမ်းစရာကြီး။ ကောင်မလေးတို့ကျူရှင်က ကျောက်တောင်မှာလေ။ အဲ့ဒီကနေပြီတော့ ဈေးလေးကိုအထိသွားရရော။ ကျောက်တောင်ရဲစခန်းကိုဖြတ်၊ နောက်တော့ မြို့ထဲရောက်၊ အဲ့ဒီကနေမှ ကျောင်းတွေဆီကိုသွားရတာဆိုတော့ လမ်းတစ်လျှောက်ရှုခင်းတွေက ကြည့်လိုကိုမဝဘူး။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ အိပ်ငိုက်နေလို့ ဘာမှမသိဘူး။ အခုမှပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြီး ကြည်နူးရတာ။ ဘဝကလည်း ဆိုးပါ့။ ကျောင်းရောက်တော့ ကောင်မလေးတို့က အမှတ်နဲ့လိုက်ပြီး အတန်းခွဲတော့ သူငယ်ချင်းတွေက အတန်းမတူကြတော့ဘူး။ အဲ.. သူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးထဲမှာ မိန်းကလေးဆိုလို့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်တည်း :( ။ ကောင်မလေးရယ်၊ ဖြိုးဝေထွန်းရယ်၊ မင်းပိုင်တိုးရယ်က A- တန်းမှာ၊ မင်းသူက B၊ အေကျော်သက်ရယ်၊ ပိာန်းထက်ရယ်က C၊ အောင်မျိုးတင့်နဲ့ ဇော်ဇော်အောင်က D ဆိုတော့ အကုန်လုံးက ကွဲနေရော။ နှင်းနှင်းသန့်ကလည်း B ပဲကျတော့ ကောင်မလေးမှာ သူငယ်ချင်းကမရှိတော့ဘူးပေါ့။ နောက်ကျမှ ကောင်မလေးတို့အတန်းမှာ ယောက်ျားလေးက ၄ယောက်ပဲရှိလို့ B နဲ့ A ကို အတန်းပေါင်းလိုက်တာ။ ယောက်ျားလေးတွေ တော်ချက်. :P ။ အဲ့ဒီတော့ မင်းသူက ကောင်မလေးတို့အတန်းထဲ ရောက်လာရော။ ပိာုကောင်တွေကလည်း တစ်တန်းစီတိုးသွားတာပေါ့။ နှင်းနှင်းသန့်လည်း ကောင်မလေးတို့ အတန်းထဲရောက်လာတော့ ကောင်မလေးလည်း အထီးမကျန်တော့ဘူးပေါ့။
ကျောင်းရောက်ရောက်ချင်းဆို အိပ်လိုက်တယ်. အရင်ဆုံး။ Assembly စီမှပဲ ပြန်ထပြီးတော့ သွားစီ။ နောက်တော့ ပြန်အိပ်။ နှစ်စတုန်းက ဆရာမတွေက အိပ်တာလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်တန်းလုံးက အဆောင်ကျောင်းသားတွေချည်းပဲဆိုတော့ အိပ်မငိုက်တဲ့သူ ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ နည်းနည်းလေး ကြာလာမှ ဆရာမတွေက လက်ခံသွားတာ။ အဆောင်ကျောင်းသားတွေဆိုတော့ အဆောင်ကစာကိုပဲ အားကိုးတာလည်း သူတို့သိတယ်လေ။ အဲ့ဒီတော့ သိပ်မသင်ကြဘူး။ ကျောင်းကပေးထားတဲ့ schedule အတိုင်းသာသင်ရတာ။ အတန်းပိုင်က physics သင်တယ်။ တစ်စက်မှစိတ်မဝင်စားတဲ့ဘာသာကြီး။ တော်သေးတယ်။ အတန်းပိုင်က သင်ပြီးနောက်နေ့ ထပ်မမေးဘူး. :P ။ သင်ပုံသင်နည်းကလည်း မိုက်တယ်နော်။ ဝင်ဝင်လာချင်းကို "မင်္ဂလာပါဆရာမ" ပြီးတာနဲ့ ဖတ်စာအုပ်ကြီးကိုင်ပြီးတော့ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ Definitions တွေ ရေးပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒါဖတ်ပြပြီးတာနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြောတယ်။ ပြီးရင် ကူးခိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ပြောသေးတာ။ မင်းတို့ဒါတွေကိုတော့ ကူးဖြစ်အောင်ကူးတဲ့။ စာအုပ်ထဲမှာ စာရှိနေဖို့က အဓိကပဲတဲ့။ နောက်တော့ ပုစ္ဆာတွေသင်တယ်။ သူ့ပာာသူတွက် သူ့ပာာသူရေး သူ့ပာာသူရှင်း၊ ကူးချိန်တန်မှ ကောင်မလေးတို့က လိုက်ကူးရုံပဲ။ နောက် Bio သင်တဲ့ဆရာမက ၉တန်းတုန်းက အတန်းပိုင် ဖြစ်နေတယ်။ စိတ်ကိုညစ်ရော။ အဲ့ဒီဆရာမကကျတော့ အိပ်တာလုံးဝကိုမကြိုက်ဘူး။ သူ့အချိန်ကလည်း ကျောင်းဆင်းခါနီး နောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်တာများတယ်လေ။ မုန့်စားဆင်းပြီးလို့ တစ်ချိန်ပြီးတာနဲ့ သူ့အချိန်ဆိုတော့ အိပ်ငိုက်ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့။ တော်တော်ကို မျက်လုံးပြူးထားရတာ.. သိလား။ ကောင်မလေးတို့ စာကြိုးစားပုံများ. မျက်လုံးကြီးကိုပြူးလို့.. kwi kwi.. :P ။
ဘာအကြောင်းကိုရေးထားလဲဆိုတာတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ခံစားသူစိတ်ကြိုက် အကြောင်းအရာတွေလည်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်တာပဲ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားပြီးတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်း ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။
မနက် ၁း၃၀ နာရီ
တစ်နှစ်လုံးအစအနောက်ခံ၊ အတင်းပြောခံပြီးတော့ လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်လေးပဲ ငေးခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ ကျောင်းနှုတ်ဆက်ပွဲမှာလည်း ကောင်မလေးက သွားချင်တာကို မသွားလိုက်ရဘူး။ ဖူဖူကြီးကဆုံးသွားတော့ ကိုယ့်အဘိုးဈာပနအတွက် ခွင့်ယူလိုက်ရရော။ အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲ ဆိုတော့ နှုတ်ဆက်ပွဲကိုရောက်နေတဲ့ မမချော၅ယောက်က ကောင်မလေးအတွက် ကျောင်းကသက်အောင်ကို ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ထားပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာ။ အေးရော... နဂိုကမှ အပြောအဆိုက မလွတ်ပါဘူးဆို။ သူတို့ရိုက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်း ကောင်မလေးပဲယူလိုက်ရတယ်။ မယူလို့လည်းမရဘူး။ အတင်းကိုပေးနေတော့တာကို။ အဲ့ဒီမှာစတွေ့တာပဲ. ကောင်မလေးခမျာ ငေးချင်ပါတယ်ဆို. အပြောအဆိုလွတ်အောင် ရှောင်နေရတဲ့အဖြစ်. :P ။
၈တန်းလည်းပြီးရော သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ကွဲတစ်ပြားဖြစ်ကုန်တယ်။ အိသန္တာအောင်က အဆောင်နေသွားတော့ အ.ထ.က-၄ ကိုပြောင်းသွားတယ်။ မိုးပွင့်ဖြူကလည်း သူ့အဖေရဲ့ရွာမှာ သွားနေတယ်တဲ့။ နီလာနွယ်ကလည်း ၀ိဇ္ဇာယူလိုက်တော့ အခန်းကကွဲကုန်ရော။ ကောင်မလေးကလည်း B ခန်းကိုရောက်သွားတယ်။ နှင်းနှင်းသန့်နဲ့သဲသဲမာကတော့ အခန်းတူပေမယ့် မတည့်ကြတာများတယ်တဲ့။ ကြားရတဲ့သတင်းတွေက တစ်ခုမှမကောင်းဘူး။ အဲ့ဒီ၉တန်းလည်းရောက်ရော မှုံမှုံက ကောင်မလေးတို့ကျောင်းကို ပြောင်းလာတယ်လေ။ ကောင်မလေးနဲ့ အတူတူထိုင်တာပေါ့။ နဂိုကတည်းကမှ မှုံနဲ့တွေ့ရင် စကားစမပြတ်ပါဘူးဆို အတူတူထိုင်ရတော့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ ပြောလိုက်တဲ့စကား။ အောင်မျိုးတင့်နဲ့ဇော်ဇော်အောင်က အနီးစခန်း အ.ထ.က ကနေပြောင်းလာပြီးတော့ ကောင်မလေးတို့ကျောင်းမှာ ဆိုးနေတယ်။ ဖြိုးဝေထွန်းကလည်း မြင်းခြံကနေ ပြောင်းလာတယ်။ မင်းသူကလည်း ကောင်မလေးနဲ့အခန်းအတူတူပဲ။ မင်းပိုင်တိုးတစ်ယောက်ပဲ မနှစ်ကအခန်းမှာနေခဲ့ရတာလေ။ သဲသဲမာတို့နဲ့ အတူတူပေါ့။ သူက ပြောင်းခိုင်းတာတောင် မပြောင်းဘူး။ ကောင်မလေးတို့စက်ရုံမှာ ကျောင်းကဆရာမတစ်ယောက်ရှိတော့ ဆရာမက သူ့သူငယ်ချင်းအတန်းကို ပြောင်းပေးထားတာ။ ကောင်မလေးတို့ ပြဿနာဖြစ်ရင်လည်း ဖြေရှင်းပေးလို့ရအောင်လို့လေ။ အောင်မျိုးတင့်နဲ့ ဇော်ဇော်အောင်ကတော့ ဆိုးသလားမမေးနဲ့။ ဆေးလိပ်က စသောက်တတ်နေပြီကိုး။ မင်းသူကလည်း ရေရေလည်လည်ပဲများပြီးတော့ ကောင်မလေးတွေကို သွားရှိုးတယ်။ :D ။ ကောင်မလေးနဲ့မှုံမှုံကလည်း ပြောလိုက်ရတဲ့စကား။ တစ်ခါမှကို အမျှင်မပြတ်တော့ဘူး။ ကောင်မလေးတို့ အတန်းပိုင်က Bio သင်တာ။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ဒီ Bio ကို ကောင်မလေးက တစ်စက်မှစိတ်ဝင်စားတာမပာုတ်ဘူး။ (အဲ့ဒါနဲ့များ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ရတယ်လို့. :P ) ဒါပေမယ့် မနှစ်ကလို ရှောင်ပြေးလို့တော့ မရဘူး။ သင်ကိုသင်ရတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကောင်မလေးတို့တတွေက ကျူရှင်အတူတူပဲလေ။ ကျူရှင်ကလည်း ပျော်စရာကောင်းတော့ ကျူရှင်ကစာတွေကိုပဲ အားကိုးတဲ့သဘောပေါ့။ ကောင်းလိုက်တဲ့တပည့်တွေပဲ.. :D။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ကျောင်းကဆရာမတွေက သူတို့ကျူရှင်မယူရင် သိပ်မကြည်ကြဘူး။ ကောင်မလေးတို့ကလည်း ကျူရှင်ကိုအားကိုးတကြီးဆိုတော့ သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူးလေ။ တကယ်.. တကယ်သိလား.. ကျောင်းကသင်တာတွေကို နားလည်းမလည်ဘူး။ ဆရာမတွေကတော့ ကြိုးစားပမ်းစားသင်လို့.. နောက်ကတပည့်တွေကတော့ လုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေကြတာ။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးကျောင်းပြေးတတ်တာ ၉တန်းရောက်မှ။ ကျောင်းပြေးခြင်းရဲ့အရသာကို တကယ်မခံစားဖူးဘူး။ ၉တန်းရောက်တော့မှ တော်တော်ကောင်းပါလားဆိုပြီး အသိနောက်ကျတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တွေတင်လို့. :P ။ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီးတော့ကို ပြေးတာ။ နောက်ပြီးတော့ ၉တန်းဆိုတော့ အဆောင်ကျောင်းသားတွေပါ ရှိလာပြီလေ။ အဲ့ဒီတော့ သူတို့ဆီကလည်း ကျောင်းပြေးနည်းလေး ဘာလေးသင်ထားရတာပေါ့။ ကျောင်းပြေးလာရင် ကျူရှင်ကိုလာပြီးတော့ စာကျက်ပါတဲ့။ ကျူရှင်ကဆရာမက မှာလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ကျူရှင်ကိုမသွားဘူး။ အိမ်ပြန်ပြီးတော့ အေးဆေးနေလိုက်သေးတယ်။ နောက်မှ ဖယ်ရီကားနဲ့ ကျူရှင်ကိုသွားတာ။ ပျော်စရာကြီးပဲ.. သိလား။ တစ်ခါတစ်လေ မင်းသူနဲ့ရန်ဖြစ်ရတာကိုက အရသာတစ်ခု။ သိတယ်မပာုတ်လား. ကောင်မလေးတို့နှစ်ယောက်က မတည့်အတူနေ. မမြင်ရင်ချောင်းကြည့်တွေလေ။ ဒီကြားထဲကို ကျောင်းကားစောင့်နေရင်းနဲ့ သက်အောင်က ဖြတ်ဖြတ်သွားလို့ ခဏခဏအစခံရသေးတယ်။ သက်အောင်က သူ့အမေရှိတဲ့ကျောင်းကို ပြောင်းသွားတယ်လေ။ မြို့ပြင်က အ.ထ.က-၃ ပေါ့။ တကယ်ဆို ၈တန်းနှစ်ကအကြောင်းတွေကို ပာိုကောင်တွေ ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူး။ မင်းသူတို့ဖွတာပဲဖြစ်မယ်.. ပာုတ်တယ်နော်. :P ။
ကျူရှင်ရောက်တော့လည်း စာမသင်နိုင်သေးဘူး။ ကျူရှင်ကသူငယ်ချင်းတွေကို မတွေ့တာကြာပြီလို့စိတ်ထဲကမှတ်ပြီးတော့ စကားပြောရသေးတာ။ ဆူညံပွက်လောကိုရိုက်နေတာပဲ။ ကျောင်းတွေကမတူကြတော့ ကျူရှင်မှာမှ လာစုရတဲ့သဘောဖြစ်နေတာကိုး။ ပြီးတော့ အိသန္တာအောင်က အ.ထ.က-၄ ဆိုတော့ အ.ထ.က-၄ က ကျောင်းသူတွေကို လိုက်ရှာပြီးတော့ သူငယ်ချင်းလုပ်ထားရသေးတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ အိသန္တာအောင်က စာတွေထည့်ပေးတတ်တာကိုး။ အဲ့ဒါကလည်း ရင်ခုန်စရာတစ်မျိုးပဲ. သိလား။ အိသန္တာအောင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့စာကို ယူနေတဲ့အချိန်ဆို မှုံမှုံနဲ့ ငြိမ်းဆုလှိုင်တို့ရဲ့မျက်နှာတွေများ လငပုပ်ဖမ်းထားသလိုပဲ။ (ချစ်ကြတာ. ချစ်ကြတာ. :P )။ ကိုးတန်းတုန်းကတော့ ဒီလောက်ပဲ။ သိပ်များများစားစား ရေးပြစရာမရှိဘူး။ ကျောင်းပြေးခဲ့ရတာကိုပဲ စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးနေတာ။ အပီား.. လမ်းမှာ ကျောင်းကဆရာမတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ ဒုက္ခပဲပေါ့နော်။ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အနီးစခန်း အ.ထ.က က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့လည်း စာအပေးအယူနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားသေးတယ်။ သူ့နာမည်က စုမျက်သွယ်တဲ့။ သိကြတယ်ပာုတ်။ နောက်တစ်ခုက အောင်မျိုးတင့်ဆေးလိပ်သောက်တာကို သူ့အမေကို သွားတိုင်ဖူးသေးတယ်. :P ။ ကောင်မလေးတားနေတဲ့ကြားထဲကကို ခွာညိုဖူးနဲ့ အောင်မျိုးတင့် ချစ်သူတွေဖြစ်သွားသေးတယ်. သိလား။ သူတို့ကတော့ ပျော်စရာကြီးပဲ။ ကိုယ်ကတော့ စိတ်ညစ်နေတယ်. သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့. ။ ကျောင်းလည်းတူတာမပာုတ်. ကျူရှင်လေးပဲတူပြီးတော့။ တစ်ခုကံကောင်းတာက ခွာညိုဖူးအိမ်နဲ့ ကောင်မလေးအိမ် တော်တော်နီးနေတာပဲ။ အဲ့ဒီတော့ အောင်မျိုးတင့်က ကောင်မလေးအိမ်ကိုလာလည်သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ခွာညိုဖူးကို လာလာချောင်းကြည့်ရတာ. တော်တော်ပင်ပန်းတယ်သိလား။ အပာား.. ပြန်တွေးရင်တော့ ပျော်စရာတွေချည်းပါပဲ။ ရန်ကလည်းဖြစ်လိုက်ရသေး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၁၀တန်းကျတော့ ပျော်ရတာရော၊ စိတ်ညစ်ရတာရော ပိုစုံသွားတယ်။
ဒါက ကောင်မလေးစပ်ချင်နေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ စိတ်လည်းရှုပ်နေတာရယ်၊ အာရုံလည်းနောက်နေတာရယ်ကြောင့် မစပ်ဖြစ်သေးတာ။ ဒီနေ့တော့ တော်တော်တင်းလာလို့ ရေးလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားရင် ဆော့တီးပါနော်။ ကဗျာက ဒေါသသံလေးပါနေတယ်ထင်တယ်။ ဒေါသထွက်ထားတော့ ဒေါသသံပါမှာပေါ့. နော့လေ. :P ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါသထွက်လည်း ကဗျာတစ်ပုဒ်တော့ ဖြစ်တာပဲဗျ။ မပာုတ်ဘူးလား။ ဖတ်ကြည့်ပါဦးနော်။ ဘယ်လောက်ဒေါသထွက်ထားလဲဆိုတာ။
ညနေ ၄း၄၅ နာရီ
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://kaungmalayptt.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.